The Pilgrim's Progress (2019) | Full Movie | John Rhys-Davies | Ben Price | Kristyn Getty - MY - Stindx.com
Number of phrases: 1590
Number of words: 3689
Number of symbols: 50922
လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက အပေါလျန်နယ်မြေ မြစ်ကြီးလေးမြစ်ရှိတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အဗ်ဗ်ဒုံဆိုတဲ့ဒေသထဲမှာ မြို့ဟောင်းတစ်မြို့ ရှိခဲ့ပါတယ် ရှေးဟောင်းစကားအရ မြို့ရဲ့နာမည်ကတော့ နွတ်ကတ်စ် ဒါပေမယ့် အချိန်နှင့်စကား ပြီးတော့ လပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့စိတ်က မကြာမီပေးမှာဖြစ်တဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နာမည်က နောတ့်ကတ်စ် တချို့ကတော့ ဒါက ကဆန္ဒရှိတဲ့ အတွေးဖြစ်တယ်လို့ တွေးပါတယ် မြို့က အမှန်တကယ်ကျိန်စာသင့်ခဲ့တယ် အမြဲမပြတ်ပျက်စီးခြင်းက မြို့သူမြို့သားများကိုရွေးချယ်စရ ာမရှိဖြစ်စေပေမယ့် သူတို့ရပ်တည်နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အမြဲတစေ အားထုတ်ဖို့ ဖြစ်လာတယ် နှစ်များ၊ ဆယ်စုနှစ်များနှင့် ရာစုနှစ်များကျော်လာခဲ့ပြီး မြို့က အရေအတွက်အားဖြင့်၊ မွေးဖွားမှုများတိုးတက်လာခဲ့တယ် မြို့ကို အုပ်ချုပ်နေတာကတော့ ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေ လပ်စ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ့ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ စီစဉ်သူတွေ၊ သူတို့ကမဆုံးနိုင်တဲ့နေ့ဆိုင်းညဆိ ုင်းများနှင့် အလုပ်ချိန်များ ကြီးကြပ်မှုကြောင့် မြို့ကိုဆက်လက်တည်ရှိနေစေခဲ့ပါတယ်
ခက်ထန်ခြင်းယစ်မူးသူ နောက်တစ်ယောက် ခရစ်ရှန် ဝတ်ပြုခရီးသွားသူ နောက်တစ်ယောက် အလုပ်က မတန်တဆများလွန်းတာကြောင့်တနေ့မှာတ ော့ ပွတ်လောရိုက်ခတ်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့တယ ်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်တာကတော့.. လူတစ်ယောက် ပျောက်နေတယ်ဆရာ ဘာ…?? အခု အနောက်မှရပ်လိုက်! နောက်တခေါက်.. ပြီးတော့.. ဝိုး.. အို၊ ဒါက မင်းတို့ဒါတွေအားလုံးကို ဖြဲပြီးတော့မီးရှို့လိုက်ပါ အကုန်လုံးပဲ အခုမြန်မြန်လုပ်ပါ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ၆က ဒီနေရာကို အချိန်မရွေး ရောက်လာလိမ့်မယ်! တကယ်လို့ ငါသာမင်းနေရာမှာဆို အရမ်းဂရုစိုက်မိမှာပဲ မင်းတို့က ဘယ်ညစ်ညမ်းတာကိုမဆို ရ ရှောင်ချင်နေကြတာကိုး ဒါဆို၊ ဒါကသူပေါ့ သိပ်မှန်တာပေါ့ သစ္စာရှိခြင်း လမ်းရှာဖွေသူပေါ့ ယီး.. တော်တော်ရူးတဲ့လူ ကောင်းပြီ၊ ခင်ဗျားလူတစ်ယောက်ကို အိပ်မက်တွေအတွက် တကယ်အပြစ်မတင်နိုင်ပါဘူး ဟုတ်တယ်မလား၊ ခက်ထန်ခြင်း သူက အရုးတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ အရူးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာ အရူးတစ်ယောက်ကပဲနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီ း
စွန့်စားသွားဖို့ ရူးမိုက်တာလေ ငါအမြဲပြောသလို စည်းမျဉ်းတွေကိုရှောင်သွားတာကနေ ကောင်းတာတစ်ခုမှ မလာနိုင်ဘူး ဘာမှကိုမလာတာ နယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးတော့ ဒါက သူသွားခဲ့တဲ့နေရာလား ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ နယ်စပ်အကျော်မှာသေခြင်းကလွဲလို့ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ် ဒါမှန်တယ်မဟုတ်လား မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ခရစ်ရှန်ပါ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ… ခရစ်ရှန်.. ခင်ဗျားကကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ သိသာပါတယ်.. ပြီးတော့ သစ္စာရှိတဲ့လမ်းရှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အတ ိုင်း မင်းလိုက်ဖမ်းချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်တယ်နော် သူ့ကိုတွန်းပို့တဲ့အရာက ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်.. လမ်းလွဲခြင်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး လုံး၀မဟုတ်ပါဘူး တကယ်မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်တော့မှ၊ မဟုတ်ပါဘူး ကောင်းတယ် နောက်ဆုံးစာရွက်အပိုင်းအစတိုင်းကိုကောက်ဖို့မပျက်ကွက်စေနဲ့ ပုံကြမ်းတိုင်း! မှတ်စုစာရွက်တိုင်း! ပြီးတော့ မင်း ဟုတ်ကဲ့၊ကြီးကြပ်ရေးမှူး မင်းအတွက် အလုပ်တစ်ခုရှိတယ် အခုချက်ချင်းပေါ့၊ ကျွန်ုပ်အရှင် သစ္စာရှိခြင်း လမ်းရှာဖွေသူက ဘာတွေတွေးနေသလဲ၊ အံ့ဩမိတယ် ဘယ်သူကမှ စာအုပ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့က ြပေမယ့် စာအုပ်က သူတို့ကိုရှာဖွေခဲ့တာပါ အဲဒါကြောင့် ခရစ်ရှန်က စပြီးဖတ်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်လာခဲ့ တယ် သူဖတ်တယ်..
ဆက်ဖတ်တယ်.. ဆက်ဖတ်တယ် အဲဒီစာမျက်နှာတွေကနေ သူ့ကိုယ်သူမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး သူက ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တာ တညတာလုံး ပြီးတော့..နောက်တစ်ရက်တနေ့လုံး၊ အဲဒီရက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ထိပဲ သူကပိုဖတ်လေလေ မှန်ကန်တဲ့အရာတွေအတွက် သူရဲ့ စိုးရိမ်မှုကြီးထွားလာလေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီအရာက သူ့အတွက် ကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာ တဲ့အထိပါ ခရစ်ရှန် ဖတ်ရှုရတာက သူဘယ်တော့မှစိတ်ကူးမထားခဲ့ဖူးတဲ့အ ကြောင်းတွေ တည်ရှိနေတယ်လို့ သူဘယ်တော့မှ မသိခဲဖူးတဲ့ကြင်နာမှုအကြောင်းတွေ မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထားရန်လိုအပ်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့အရာများအကြောင်း သူ့ရဲ့မြို့မူလအစအကြောင်းတွေ၊ ပြီးတော့ လာမယ့်.. စစ်ပွဲ? ငါတို့ထွက်သွားမှဖြစ်မယ်၊ ခရစ်ရှန်နာ ဒီအထဲမှာ ဒါကအဲဒီလိုပြောထားတယ်.. ဒီထဲမှာပါတဲ့အရာကို ငါယုံကြည်တယ် ပြီးတော့ စစ်ပွဲက တမြို့လုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ် ဒါကြောင့် ငါတို့ထွက်ပြေးပြီး၊ ဘယ်ကိုရောက်အောင် ကောင်းကင်မြို့တော်၊ အလင်းမြို့တော် ဘာမြို့… ဒါက စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲ၊ ခရစ်ရှန် မင်းဒါကိုပဲဖတ်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းနားလည်လာလိမ့်မယ် ဒါအားလုံး...အဓိပ္ပါယ်....
အဓိပ္ပါယ်က? ကျမနဲ့ ကလေးတွေကို ရှင့်နောက်ကိုလိုက်ဖို့တောင်းဆိုန ေတာလား နယ်စပ်ကိုကျော်ဖို့လေ မဟုတ်သေးဘူး၊ခရစ်ရှန် ဒါကအဓိပ္ဗါယ်မရှိဘူး လုံးဝကိုမရှိဘူး ရှင် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဒီစာအုပ်ကိုစဖတ်လိုက်ကတည်းက ရှင်က အရူးတွေလိုပဲ ဆက်ပြီးဖြစ်နေလိုက်တာ မြို့က ဖျက်ဆီးခံရတော့မယ် မြို့က မီးတောက်တွေကြားမှာရှိနေတော့မယ် ဒါက ကျွန်မနဲ့ကလေးတွေအတွက် ဒီဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေထဲက ရှင့်ကိုမြင်ရတာခက်တယ် သေချာကြိုးစားလာပြီးမှ ဒါက ဒီအလေးချိန်ပဲ အလေးချိန်? ဘာအလေးချိန်လဲ၊ ခရစ်ရှန်? ရှင်က အရေပြားနဲ့အရိုးတွေကလွဲပြီး ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်ဘူး ငါဒါကို ဖတ်လေလေ ငါ့အပေါ်မှာ အလေးချိန်ကပိုများလာလေလေပဲ မင်းမမြင်ဘူးလား အို၊ ခရစ်ရှန်! ဒါအားလုံးက ရူးမိုက်တယ်လို့ထင်ရမှန်း ငါသိတယ် ဒါပေမယ့်.. ငါနင့်ကိုချစ်တယ် ပြီးတော့.. ငါတို့အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲငါလိုချင်တယ်. တကယ်လို့မြို့က ဖျက်ဆီးခံရရင်… အို တကယ်လို့မြို့က ဖျက်ဆီးခံရရင်… တကယ်လို့မြို့က ဖျက်ဆီးခံရမယ်ဆိုရင် ငါနင်နဲ့ ကလေးတွေ… ဒါမှမဟုတ်အခြားလူတွေကို ဒီကိစ္စကြောင့် ဒါကြောင့်မပျက်စီးစေချင်ဘူး ငါနင့်ကိုချစ်တယ်၊ ခရစ်ရှန်နာ ဒါဆို ရွေးပါ ဘာကိုလဲ ရွေးပါ၊ ခရစ်ရှန် ကလေးတွေရယ်ကျွန်မရယ်... ကျွန်မတို့ ရှင့်ကို နေဝင်နေထွက်
ဒီလိုမျိုးမြင်ရတာ မမြင်နိုင်တော့ဘူး ရှင်က ရှင်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ရမယ်ကျွန်မတို့နဲ့ဒီမှာနေမလား ဒါမှမဟုတ်ထွက်သွားမလား ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ ရှင်နဲ့မလိုက်နိုင်ဘူး မလိုက်ဘူး ကျွန်ုပ်ရဲ့ အရှင် အမှတ်အသားတစ်ခုခု? အမှတ်အသား? အို၊ အများကြီးပဲ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဟိုမှာ တစ်ခု! မြင်ပါသလား? ပျောက်သွားတဲ့လူကိုပြောတာလေ၊ အရူးရဲ့ အို.. အို၊ အို..ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေါ့! ကောင်းပြီ၊ အွန်.. ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ မဟုတ်ဘူး? ကျွန်တော်တို့ နယ်စပ်ကိုကျော်ပြီး သူရဲ့ ခြေရာတွေနောက်ကိုလိုက်တာ..သိတဲ့အတ ိုင်း.. မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ရွံ့အိုင်ဆီကိုလေ ဒါဆို အဲဒီနေရာကသူအဆုံးသတ်သွားတဲ့နေရာပေ ါ့ ရွှံ့ အိုင် အင်.. ကောင်းပြီ၊ အို.. အဲဒါက “မဟုတ်ဘူး”ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာ ပါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကောင်းပြီ၊ သူရဲ့ ခြေရာတွေက.. ခြေရာတွေဦးတည်သွားတာက ရွှံ့အိုင်အထဲကို ပြီးတော့ အပြင်ဘက် ဦးတည်နေတာ.. ဦးတည်နေတာက အို.. အပြင်ဘက်နိုင်ငံ ဒါဆိုဖြစ်နိုင်တာ ဒီသစ္စာရှိခြင်းက .. အသက်ရှင်နေတယ်။ အသက်ရှင်နေတယ်?
အို ဘုရားရေ ဘုရားရေ ဘုရား သခင်က ပျော်တော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်မလား? ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားဖို့လိုတ ဲ့အခါ မင်းကိုပြောပြမယ် အိုး မှန်တယ် ဟုတ်တာပေါ့ ငါတို့နောက်ထပ်အရူးတွေကို ဆုံးရှုံးဖို့မတတ်နိုင်တော့ဘူး. စစ်ပွဲမတိုင်ခင် တကယ်မတတ်နိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် သခင်ကိုတော့ပြောပြရမယ် မြို့ကို ပြန်သွားပြီး၊ ကောလဟာလလွှင့်လိုက်.. သစ္စာရှိခြင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုအသေ းစိတ်ပြန်ပြောပြဖို့ အရမ်းဆိုးရွားနေတယ်လို့ မင်းပြောတာနည်းလေလေ၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးမှန်းဆတာက ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ပေးတာများလေလေဖြစ်မယ် အား၊ ညဏ်ကောင်းလိုက်တာ! ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံပဲ သွား ငါသိပ်မကြာဘူး အို၊ အခုချက်ချင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်အရှင် အခုချက်ချင်းပါ သခင် ဒါကဘာလဲ? သခင် ငါ့ကို ငါ့ရာထူးဘာလဲဆိုတာ ပြန်ပြီးသတိပေးစရာမလိုဘူး အာ ဟုတ်ကဲ့ မှန်တာပေါ့ သခင့်ရဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေထဲကတစ်ခု သစ္စာရှိသူလို့ခေါ်တဲ့လူ သူပျောက်သွားလို့ပါ ကောင်းပြီ သူကတကယ်တမ်းပျောက်သွားတာတော့မဟုတ် ပါဘူး ကျွန်တော်တို့သိရတာကသူပျောက်တယ်ဆိ ုတာ ဟိုကို အပြင်ဘက်နိုင်ငံ ငါသိပြီ.. သခင်နားလည်ပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ သခင်
ကျွန်တော်တို့ တွေ အကောင်းဆုံး အား..! ငါနားလည်ပေးတယ်လို့ မင်းကိုဘာကထင်မြင်ချက်ပေးတာလဲ အ...အ....အ....ကျွန်တော် ထွက်သွားစမ်း! ဒါ.. ဒါမျိုးထပ်မဖြစ်စေရပါဘူး.. သခင် ကျွန်..ကျွန်တော်သေချာပြောနိုင် သတ္တဝါ! သ-သခင်? သတိရှိပါ အရူးတစ်ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ကို ဖန်တီးဖို့အကြောင်း ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ငါဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ ငါ့မှာရှိတာအားလုံးက.. ဒီမြေပုံပဲ တကယ်လို့ သူတို့ကိုကယ်ဖို့ မြို့ကို အချိန်မီပြန်မရောက်လာနိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ? ငါဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ? ကျွန်တော် ဒီမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် ဘာ? ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ဟိုမှာမမြင်ခဲ့ဘူး ကျွန်တော်အခုမှ ရောက်လာလို့ပါ ကျွန်တော့်နာမည်က ဧဝံဂေလိဆရာပါ အခု.. “ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်လဲလို့” ခင်ဗျားမေးနေတာ ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ် ပြေးပါ ပြေးပါ? မတွေဝေပါနဲ့ အချိန်မဖြုန်းနဲ့တော့ ခင်ဗျားလုပ်ရမယ်လို့ သိထားတာတွေကိုလုပ်တော့
ခင်ဗျားနှလုံးသားထဲမှာ ယုံကြည်တဲ့အရာတွေကို ခင်ဗျားမျက်စိနဲ့ မကြာခင်မြင်ရတော့မယ် ခင်ဗျားနောက်ကျောပေါ်က အဲဒီအရာကိုဖယ်ထုတ်ရတော့မယ် အဲဒီ? .. ခင်ဗျားဒါကို မြင်နိုင်လား? ကောင်းပြီ ကျွန်တော်တကယ်လုပ်နိုင်တယ်၊ ကျွန်တော်ပြောရဲတာက ဒါက လေးလံစိတ်ပျက်စရာဝန်ထုပ်ကြီးပဲ ဒါက တရက်ပြီးတရက် ပိုကြီးလာတဲ့ပုံပဲ သင့်ရဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းက ကြီးထွားလာရင် မိတ်ဆွေ၊ သင့်ရဲ့ ဝန်ထုပ်လည်း ကြီးလာမယ် ဒါပေမယ့်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှ ဖယ်ထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်အာမခံတယ် အခု၊ ဟိုမှာ တံခါးဝကိုခင်ဗျားမြင်လား တံခါး၀? ဘယ်မှာလဲ? လာပါ၊ အခုလာပါ ခင်ဗျားမျက်ရည်တွေကို မသုတ်လိုက်ပါနဲ့ ဒါတွေကနေတဆင့် ကြည့်လိုက်ပါ တခါတလေမှာ မျက်ရည်တွေက ကြည်လင်မှုကိုသယ်ဆောင်ပေးတယ် ကျွန်တော် အခုထိ မမြင်နိုင် ခင်ဗျားရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ကျော်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ၊ ကောင်းတဲ့ခရစ်ရှန် ကျွန်တော်.. အို နေဦး ကျွန်တော်မြင်ပြီ ထင်တယ်၊ ကျွန်တော်.. ဟိုမှာ မြင်ပြီ အလင်းနားမှာ ကောင်းတယ်၊ ကောင်းတယ် အခု ကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါ အဲဒီအလင်းကို ခင်ဗျားမျက်စိကနေမခွာစေဘဲ အဲဒီအလင်းဆီကိုတည့်တည့်သွားပါ ညာဘက်တွေ ဘယ်ဘက်ကိုတွေကိုလုံး၀မကွေ့ပါနဲ့ လမ်းဖြောင့်အတိုင်း ဆက်သွားပါ အရမ်းကောင်းတယ် အခု၊ မကြာမီမှာပဲ ခင်ဗျားက တံခါးဝဆီကိုသွားရလိမ့်မယ် တံခါး၀ အဲဒီနေရာမှာ၊ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ခင်ဗျားကို ပြောပြလိမ့်မယ်
အခု သွားတော့ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော် မြန်မြန် အချိန်တွေပိုမဖြုန်းနဲ့တော့! ပြေးတော့ ပြေးရမယ်? ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်လဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းစွာရည်ရွ ယ်ထားတဲ့သူက ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ ်ဘူး ဒီလမ်းပဲ - သူ့အသံကြားရတယ်ထင်တယ်! လာခဲ့ - ဘာလဲ? ပြေး! မင်းအနောက်မှာပဲ! ဟိုမှာ ! အခုသူ့ကိုတွေ့ပြီ ထင်တယ်! ခရစ်ရှန်! ခရစ်ရှန်! ဘုရားရေ! ဒီကိုလာခဲ့! ခက်ထန်ခြင်း? မင်းက ဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ? မင်းအခုဖြစ်နေတာထက် မင်းကိုယ်မင်း ပိုပြီးမရူးသွားအောင် မင်းကိုလာထိန်းပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာ မင်းရဲ့မိန်းမက ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ငါ့ကိုပြောပြတယ် - ပြီးတော့ မဟုတ်ဘူး အကြောင်းရင်းကိုနားထောင်ဖို့ -ငါသွားဖို့ လိုတယ် မင်းကတိမပေးမချင်း ငါမင်းကို သွားခွင့်မပေးဘူး ငါသွားရမယ်- မသွားရဘူး မလှုပ်နဲ့တော့ ကောင်းပြီ.. ကောင်းပြီ! နောက်ဆုံးတော့! ကောင်းပြီ၊ ပျော့ပျောင်းခြင်း ငါ့ကိုဝန်းရံပေးတာကျေးဇူးပဲ မင်း သူ့ကိုမိသွားပြီ ကောင်းပြီ ပြန်ဖို့ အသင့်ပဲလား? မပြန်ဘူး ဒါဆိုကောင်းပြီ.. လမ်းခရီးသာယာပါစေ! ဒီကိုပြန်လှည့်လာခဲ့! ကောင်းပြီ မင်းက ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ ငါနားထောင်မယ်လို့ ငါပြောတာ ငါရပ်မယ်လို့ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး အို ညီလေး!
ငါ့ကိုစောင့်ပါဦး၊ ခရစ်ရှန်! ငါတို့ချစ်တဲ့သူအားလုံးကို စွန့်ပြီးသွားတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာကြောင့်ရှိတာလဲ? ဟုတ်တယ် ဘာကြောင့်လဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ ဒါတွေက ကောင်းကင်မြို့တော်ရဲ့ ဘုရင်က သူရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ကတိပေးထားတာနဲ့ရှင်ရင်သေးငယ်သွားတ ယ် ဘုရင်ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည ့်နဲ့ပေါ့ အို! ဝမ်းနည်းခြင်းတွေမရှိတော့ဘူး ဝိုး! ရွှေနဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်းတွေ… ငါစွန့်ခွာထားခဲ့တဲ့ မြို့ကမကောင်းမှုတွေ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတာ.. အဲဒီမှာ သူပြောတာအချက်ကျတယ်! မင်းတိတ်တိတ်နေစမ်းပါ မင်းက တကယ်အကူအညီမပေးဘူး! ကောင်းပြီ! ငါရှာဖွေနေတဲ့မြို့တော်က ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေအားလုံး ထာဝရတည်တယ် ငါအဲဒီမြို့ကိုရှာပြီး၊ အဲဒီနေရာကို ဘယ်လိုသွားရတာလဲဆိုတာ တခြားသူတွေကို ပြောပြဖို့ပြန်လာချင်တယ် မင်း အဲဒီအကြောင်းတွေကို ဒီစာအုပ်ထဲမှာ အားလုံးဖတ်နိုင်တယ် တွေ့လား? ငါမတွေ့ဘူး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ငါတော့မသွားချင်ဘူး ဒီစာအုပ် မင်း ပထမနေရာမှာ ဘယ်တော့မှမထားသင့်တဲ့စာအုပ်က ဘာမှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး မင်းကိုတော့ အိမ်မက်ဆီကို သွားတဲ့ခရီးတစ်ခုမှ ထားပေးတာနေမယ်.. ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ အရမ်းနောက်ကျနေပြီ ငါ့ခေါင်းအုံးကို လွမ်းနေပြီ! ဒါဆိုမင်းငါနဲ့အတူသွားမှာလားမသွား ဘူးလား မင်းကအတော် ခေါင်းမာတဲ့လူ
ငါကလည်း မင်းကို အဲဒီမေးခွန်းပဲပြန်မေးရမယ် ကောင်းပြီ၊ မင်းက အရမ်းခေါင်းမာတယ်လို့ငါထင်တယ် မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအားလု ံးအတွက်ဖြစ်ပေမယ့် လာသွားရအောင်၊ ပျော့ပြောင်းခြင်း သူ့ကိုဆက်သွားခိုင်းရအောင် ငါတို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ ငါပြောတာမကြားဘူးလား! သူ ပြောတာမကြားဘူးလား ရွှေခင်းထားတဲ့လမ်း ဝမ်းနည်းခြင်းတွေမရှိတော့ဘူး ဘာလဲ? မရူးချင်စမ်းပါနဲ့! ကောင်းပြီ! ကောင်းပြီ၊ ဒါဆို? မဆုံးနိုင်တဲ့အလုပ် အရာအားလုံးက ပြိုလဲပျက်စီးမယ်.. ရွှေခင်းထားတဲ့လမ်း ဝမ်းနည်းခြင်းတွေ မရှိတော့ဘူး ဟင်း… ပြန်တွေ့မယ်! ကောင်းပြီလေ! ငါ့စိတ်ပြောင်းတာ ဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးလေ အထင်အရှားပဲ မင်းရဲ့စိတ်ကောမပြောင်းဘူးဆိုတာသေ ချာလား ခက်ထန်ခြင်း? ငါ့ပုံက ပြောင်းချင်တဲ့ပုံပေါ်နေလို့လား? အရူးတွေ၊ သေမင်းဆီကို သွားနေကြတာ အိုး မင်းရဲ့သနားစရာမိန်းမနဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေက ငါအပြည့်အစုံ သတင်းပို့ရမယ် ဒါဆို.. ရွှေခင်းထားတဲ့လမ်း ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိတော့ဘူး.. ဆက်ပြောပါဦး နောက်ထပ်ဘာလဲ? မဆုံးတဲ့အသက် ငြိမ်သက်တဲ့နှလုံးသား ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ ဘုရင်ရဲ့ ရှေ့တော်မှောက်မှာ တောက်ပတဲ့ဝတ်လုံတော်တွေနဲ့
အို ကောင်းကြီးတွေပဲ ငါတို့ ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ အဲဒီနေရာရောက်အောင် မြန်မြန်သွား ဒါဘာလဲ..? ရွှံ့ ရွှံ့ ? ပျော့ပြောင်းခြင်း အဆင်ပြေ... ငါ့ကိုဆွဲ... ငါ မင်းရဲ့စကားကို နားမထောင်သင့်ဘူးဆိုတာ ငါသိခဲ့တယ်! ဒီမှာ.. ရွှေခင်းထားတဲ့လမ်း! တောက်ပတဲ့ဝတ်လုံတော်? တောက်ပတဲ့ဝတ်လုံတော် ဟုတ်လား မင်းနောက်ကိုလိုက်တာက အစကတည်းက ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ အဆုံးမှာ ပိုပြီးကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှိ နိုင်မှာလဲ! မင်းရဲ့ စာအုပ်အတွက် အရမ်းများသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် မကူဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး.. ကူ- ကူညီပါ! မင်းခေါ်တာလား? ဟင်? ကျွန်တော် အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ် တခြားဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး ဒါကြောင့်ငါလာတာလေ ဒါက ငါ့နာမည်ပဲလေ ကျေးဇူးပါ ပိုကောင်းသွားလား? မင်းဘာကြောင့်လှေခါးတွေကို မသုံးခဲ့တာလဲ လှေခါးတွေ! ပြန်ဖုံးသွားပြန်ပြီ! ဘုရင်က အဲဒါကိုခင်ဗျားတို့လိုလူမျိုးတွေက ို ကူညီဖို့အဲဒီနေရာမှာထားတာ၊
ဒါပေမယ့်.. မကြာခင် ရွှံအိုင်က ဒီနေရာအထိရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ သံသယတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျမှုတွေနဲ့ ပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးဖို့ ဆွဲချလိုက်တာပဲ ဒါဆို ဒါက..? ရွံ့နဲ့ပုံစံတူတယ်! ရွှံ့လိုပဲ ကပ်နေတယ်.. ပြီးတော့.. အို! ဒါက လူတစ်ယောက်ကို ရွှံ့လိုပဲ ဆွဲချလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်၊ ဒါမဟုတ်ဘူး! ဒါကကြောက်ရွံ့မှုအရှုပ်အထွေးပဲ၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရွှံ့အိုင် ဟိုဟာက ခင်ဗျားမိတ်ဆွေလိုမျိုး လူတွေ စတောင်မစသေးပဲနဲ့ အရှုံးပေးသွားတဲ့နေရာလေ! ဒါပေမယ့်၊သူမှန်တယ်နော်၊ ခင်ဗျားသိလား မှန်တယ်? ပြန်သွားဖို့လေ၊ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ ဒါပေမယ့်..... ခင်ဗျားက အခုအစပြုခြေလှမ်းတဲ့ ဒီခရီးက.. စိတ်နှစ်ခွရှိတဲ့သူတွေအတွက် မဟုတ်ဘူး! မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး၊ ပျော့ညံ့တဲ့သူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး လုံးဝကိုမဟုတ်ဘူး! ပြီးတော့ ဒီရွှံ့အိုင် ဒါက နောက်လာမယ့် ဒုက္ခတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် မပြောပလောက်ပါဘူး ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ် ခင်ဗျားကောင်းကင်ဘုရင်ကို သိလား? သူ ကျွန်တော့်ကို ဒီနေရာကို လွှတ်ခဲ့တာ ကောင်းကင်မြို့တော်ကို ခင်ဗျားမြင်ဖူးလား? မြင်ဖူးတာ သေချာတာပေါ့! ဒါဆို ဖယ်ပေးပါဦး လမ်းခရီးက ကြမ်းတမ်းမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်
ဒါကိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ခဲ့ပ ြီးပြီ ကျွန်တော်ခရီးကို ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ဘုရင်ရဲ့ အကူအညီကိုပဲမျှော်လင့်နိုင်တယ်.. ကျွန်တော်ပြီးအောင်သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ခရီး ဒါဆို ယုံကြည်အောင်ပြောဖို့ မလိုတော့ဘူး၊ခရစ်ရှန် ခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာကို အလင်းဆီကိုပဲမူတည်ပြီး နောက်ပြန်မလှည့်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သံသယမရှိတော့ဘူး ခင်ဗျားရဲ့ ခရီးကို ဆက်သွားပါ.. ပြီးတော့ မမေ့ပါနဲ့.. အကူအညီက ပုံစံအချို့ နဲ့ ဒါမှမဟုတ် တခြားပုံစံနဲ့ဘယ်တော့မှအဝေးကြီးမှ ာမရှိဘူး! နောက်ထပ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အို.. ဒါရွှံ့တွေ၊ ခင်ဗျားမှာ ရွှံ့နည်းနည်းကျန်နေသေးတယ ခင်ဗျားရဲ့.... အို. အဟမ်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် သတိရပါ၊ အကူအညီကပုံစံအချို့ နဲ့ ဒါမှမဟုတ် တခြားပုံစံနဲ့ဘယ်တော့မှအဝေးကြီးမှ ာမရှိဘူး! အို ဘုရားရေ ဘုရားရေ ဘုရား နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ထွက်သွားပြန်ပြီအိုး.... သခင်ကြားပြီးပြီပဲ ဟုတ်တယ်၊ ကြားပြီးပြီ ပြီးတော့ သခင်လည်း ကြားပြီးပြီ အထင်အရှားပဲ.. သူက အပြင်ဘက်နိုင်ငံထဲကို ရွှံ့အိုင်ကျော်ပြီးသွားနေတယ် ဒါဆို.. ငါတို့လုပ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး အို. ဒါပေမယ့် ရှိတယ် အပြင်ဘက်နိုင်ငံမှာ ငါတို့သူ့ကို ဟန့်တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး.. ဒါပေမယ့် ငါတို့သူ့ကိုသွေးဆောင်လို့ရတယ် ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့၊ သံသယတွေနဲ့၊ မာန်မာနတွေနဲ့ …
… သွေးဆောင်လို့ရတာတွေ အများကြီးအများကြီး ရှိတယ်.. ဟားဟား ဟားဟား! ဟားဟားဟားဟားဟား! ဟားဟား ဟားဟား! ဒါကြီးကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ ငါမလုပ်သင့်တဲ့ အရာက လောကထဲမှာ ဘာကိုမဆိုငါပေးလိုက်မယ် သူ့ကို ဘာကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့လဲ ကောင်လေး လောကထဲကြီးမှာ၊ မင်းနောက်ကျောက အို ဒီဆိုးရွားတဲ့အရာကြီးက ဘာလဲ! ကျွန်တော်....ကျွန်တော် အမှန်တော့ လမ်းတဝက်မှာ.. အို၊ ငါ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ? နာမည်က လောကီ၊ လောကီက ပထမ၊ ပညာရှိက ဒုတိယ တကယ်တော့၊ ဒါတွေကို ဘယ်တော့မှ မရောမိစေနဲ့! မင်းပြောနေတာက? ကျွန်တော်က အခု ကောင်းကင်မြို့တော်ကို သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာ တံခါးဝလမ်းကနေသွားမယ် နာရီနဲ့အမျှ ကြီးလာတဲ့ ဒီဝန်ထုပ်ကြီးကို ဖယ်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတဲ့နေရာကိုပေါ့ ဒါဆို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ရမယ်ပေါ့ ကောင်လေး! ဒါပေမယ့် ဟုတ်လား? ကောင်းပြီ အဲဒါကြီးကိုဟိုမှာဖယ်ထုတ်နိုင်တယ် လို့ မင်းကိုဘယ်သူကပြောတာလဲ ကျွန်တော် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဆီလာတဲ့ လူကောင်းတစ်ယောက်၊ ဧဝံ- ဂေလိဆရာ!တကယ်တော့! သနားစရာ၊ သနားစရာ
ဘာကိုလဲ ဒါဆို မင်းက ဒီလမ်းတလျှောက်လုံး လာခဲ့ပြီးပြီပေါ့! - အို သနားစရာ၊ သနားစရာ - ကောင်းပြီ...ဘာလဲ? ဒါက ဒီ.. ဧဝံဂေလိဆရာလေးပဲပေါ့.. ဟုတ်တယ်? ကောင်းပြီ.. သူက နည်းနည်း.. ဒါဆို သူက..? ဟုတ်တယ်.. သူက .. ငှက်တစ်ကောင်လို အူကြောင်ကြောင်ပါ! သနားစရာချာတိတ်လေးက သူ့ခေါင်းတော့တိမ်ဖုံးနေပါပြီကွာ! မဟုတ်ဘူး! ဒါဆို ပြဿာနာတွေ၊ အန္တရာယ်တွေကလွဲလို့ ဘာမှမရှိတဲ့ ဒီလမ်းကို ဦးတည်ပြီး မင်းကိုပို့ပေးတဲ့ ဒီလိုဧဝံဂေလိဆရာမျိုး မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိနေတယ် မင်းတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးတဲ့ ကုတ်ခြစ်ရာတွ မျက်ရည်တွေ၊ ရွှံ့တွေကို ငါမြင်နေရတယ်! ဒါဆို… ဒီဦးတည်ရာကိုမသွားနဲ့တော့၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊ မိုက်မဲတဲ့နေရာပဲ ဒါပေမယ့် အဲဒါမျိုးမရှိတဲ့ ဒီဦးတည်ရာအတိုင်းသွား.. ဒါပေမယ့် “ဒါပေမယ့်”မရှိရဘူး! ငါ့ကို အငြင်းအခုန်မလုပ်နဲ့တော့ မင်းနားထောင်!.. ဒါကြောင့်.. ဒီလမ်းအတိုင်းမင်း ဆက်သွားပါ.. တော်လိုက်တဲ့ကောင်လေး! ဒီလမ်းအတိုင်းပဲဆက်ပြီး သွား၊ ပြီးတော့ မရပ်လိုက်နဲ့.. အကြောင်းအရာတွေက ဘယ်လိုမျိုးပဲ စပြီးဖြစ်နေပါစေ.. အဲဒီဦးတည်ရာအတိုင်း သွားပါ ငါပြောမယ်. မင်းအဲဒီကိုရောက်တဲ့အထိ.. အကျင့်တရား လို့ခေါ်တဲ့ရွာဆီကို.. အဲဒီမှာ တောင်ကုန်းကို မင်းတွေ့လိမ့်မယ်! မင်းတောင်ပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတာ မင်းသိလိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
အမှတ်အသားတွေက မင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်! အဲဒီမှာ.. မင်းငါ့ကို ပြောပြနေတဲ့ မိုက်မဲတဲ့တံခါးဝမှာတော့မဟုတ်ဘူး. . ဒီရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကြီးကို ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာ မင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်! အဲဒီနေရာကို ဘယ်သူသွားတာလဲ? ငါပြောတယ်၊ ဘယ်သူ အဲဒီနေရာကို သွားတာလဲ? ကျွန်… တော့်… နာ..မည်.. ခ.ခရစ်ရှန်ပါ! ကျွန်တော့်ကို ပညတ်တရားဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ကို ရှာဖို့ ပြောထားလို့ပါ ငါက လူတော့ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် နူးညံ့တဲ့သူတော့ မဟုတ်ဘူး! ဟားဟားဟားဟားဟား ကျွန်တော့်ကိုပြောပြတာက သင်က ဒီဝန်ထုပ်ကို ဖယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ မင်းအော်ငိုနေတာရပ်လိုက်၊ ဒါနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေ! ငါကတနေ့လုံး အချိန်မရဘူး! သင်က.. ကျွန်တော့်အတွက ဒီဝန်ထုပ်ကို ဖယ်ပေးနိုင်မယ် တကယ်တော့ ငါလုပ်နိုင်တယ်! အိုး ကောင်းပြီ..ဒါဆို၊ ကျေးဇူးပြုပြီး.. လုပ်ပေးမလား? ကောင်းပြီ ငါမင်းဆီကို အခုမဆင်းလာနိုင်သေးဘူး ဟုတ်တယ်မလား? ငါက တောင်တစ်တောင်လေ မင်းငါ့ဆီကို လာရမယ်
ဒါ-ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလဲ? လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာပါ ဟမ်.. ဘယ်တစ်ခုလဲ? တကယ်တော့ အားလုံးပဲ! ဘယ်တစ်ခုလဲ! ဟား ဟား ဟား! ဒါ-ဒါ-ဒါပေမယ့် ဒါတွေကအများကြီးလေ! အရမ်းများတယ်?အရမ်းများတယ်? ဒါတွေက ဘာကြောင့် မလုံလောက်နိုင်တာလဲ? အခုလာခဲ့! မင်းက ဒီဝန်ထုပ်ကို ဖယ်ချင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်မလား? ငါ့ဆီကို လာခဲ့? ဒါ-ဒါ ဒါပေမယ့်၊ ကျွန်တော်.. ငါပြောသလိုလုပ်ပါ! အခုလာပါ! မင်းအရမ်းကို ဝေးနေသေးတယ်! ငါမင်းကို အခုမြင်ဖို့ခက်နေသေးတယ်! ဆက်လုပ်၊ ငါ့လူ၊ ဆက်လုပ်! ငါက မင်းအတွက် မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး! မင်းအဲဒီအမှတ်အသားကို လွဲသွားပြီ! မင်းတစ်ခုလွဲသွားပြီ ငါပြောနေတယ်! ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ကျွန်- အား.. မင်းကိုယ်မင်းတောင် မကူညီနိုင်တဲ့အချိန်မှာ မင်းကို ကူညီဖို့ ငါ့ကို မျှော်နေသေးတယ်! မတ်တပ်ရပ်လိုက်စမ်း! အား.... ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ? မင်းက လမ်းခရီးကနေလှည့်ထွက်ဖို့ ဘာလို့အရမ်းမြန်တာလဲ ကျွန်-ကျွန်တော် မသိဘူး! ဟား! အို ဘုရားရေ အား. အား လာခဲ့ ဒီအရာတွေအားလုံးကနေ မင်းကို ကယ်ထုတ်မယ် ပညတ်တော်တွေက မင်းရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေကို မပေးနိုင်ဘူး၊ ခရစ်ရှန်! အဲဒါတွေက မင်းပညတ်တော်တွေအားလုံးကို မစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကို သတိပေးဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်တယ် ပညတ်တရားက မင်းရဲ့ဝန်ထုတ်တွေကို ဘယ်တော့မှ ဖယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး
ပြောတာ ဘာလဲ??? ငါပြောတာ- ငါလုပ်တဲ့နိုင်တဲ့အရာကို ငါမင်းတို့ကိုပြမယ်! ငါ့ရဲ့တန်ခိုးတွေကို ကြည့်ဖို့ ပြင်ထားကြ ဆိုးဝါးတဲ့လူတွေ.. ခရစ်ရှန် ပြေး! မင်းတို့ကို ငါ့ရဲ့ တန်ခိုးအလေးချိန်အောက်မှာ မြှပ်ထားလိုက်မယ် ငါလုပ်မယ်.. မင်းနဲ့ မင်းရဲ့ ဝန်ထုပ်ကမ္ဘာကို ဖယ်ပေးမယ်! အား…! အိုး….! ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား အား! ငါတို့ဒီမှာ! ပညတ်တရားက ပြိုကျလာတဲ့အခါမှာ ငါတို့ကို လမ်းခရီးဆီ လွင့်စင်သွားစေတာပဲ ဒီ လမ်းခရီး မင်း.... ဆက်လိုက်ဖို့ ဒါတကယ်တော့ ကျွန်တော့်အပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အို၊ သိပြီ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့လူ၊ လောကီပညာရှိ..ဆိုတဲ့- ဟ! ဒီလူလိမ်လူညစ်လား ? ကောင်းပြီ၊ သူက ကျွန်တော့်ရဲ့ဝန်ထုပ်ကို ဖယ်ဖို့ ပိုလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လို့ ပြောတယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို အေး မင်းကို ဒီလမ်းခရီးကနေထွက်ဖို့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာ.. ဘုရင်က ခင်ဗျားကို လမ်းမှားဆီ ဦးဆောင်ခေါ်သွားတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလား ကောင်းပြီ၊ မဟုတ်.. ကျွန်တော်... ခင်ဗျားက ဒီနာကျင်မှုကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် သယ်လာခဲ့တာ ဘုရင်က ခင်ဗျားကိုပို့ပေးတဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေကို ငြင်းပယ်ပြီးတော့လေ၊ ခရစ်ရှန် ခင်ဗျားမှန်ပါတယ်! ဒါကျွန်တော့်အပြစ်ပါ.. ကျွန်တော် လောကီပညာရှိရဲ့စကားကို နားထောင်ဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး၊
ဒါက .. ဒါက ဘယ်သူ့အပြစ်မှမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော့်အပြစ်ပါ၊ ဝမ်းနည်းပါတယ်! ကျွန်တော်က- အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ ဘာ? ကျွန်တော်က.. အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ မျက်ရည်တွေကနောင်တရခြင်းကိုညွှန်ပ ြနေတာဆိုရင် သင့်မျက်ရည်လည်း အတူတူပဲ ဘုရင်ကပြောခဲ့တယ် မှားယွင်းတဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းပေးမယ် တဲ့ အခု၊မတ်တပ်ရပ်ပါ.. ခရီးကို ဆက်သွားပါ မင်းမှာ ရှုံးဖို့အချိန်မရှိဘူး ဒါပေမယ့် သင်ယူပါခရစ်ရှန် ဒီလှည့်ဖြားသူက မင်းကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့အရာနှစ်ခုရှိ တယ် ပထမတစ်ခုကသူက မင်းကို လမ်းခရီးကနေ အလွယ်တကူထွက်သွားဖို့ လုပ်မယ် ဒုတိယတစ်ခု မင်းရှောင်ရှားလိုတဲ့အရာကို မင်းရဲ့ လမ်းခရီးမှာ အခက်အခဲဖြစ်အောင် လုပ်မယ် အခု.. တံခါးဝကို သွားတော့! ပြီးတော့ သတိရပါ၊ ကောင်းသောခရစ်ရှန် လမ်းကြောင်းကို နောက်ထပ် မစွန့်ခွာပါနဲ့! မင်းကစိတ်ပျက်စရာရှုံးခဲ့တယ်! ဒါပေမယ့်.. ကျွန်တော် သူ့ကို.. လမ်းကနေ ထွက်သွားစေတယ်လေ! ပြီးတော့ မင်းသူ့ကို ထားခဲ့တယ် လောကီပညာရှိနဲ့ ပညတ်တရားရဲ့ လက်ထဲမှာ.. သူတို့ရဲ့ ဝင်္ကပါထဲမှာ သူ့ကိုဖမ်းမိမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သေချာတယ် သူက ငါတို့လူဖြစ်ခဲ့တာ၊ ငါတို့လူဖြစ်ခဲ့တာ ပြီးတော့ အခု.. သူမဟုတ်တော့ဘူး!
အိုး..! သခင် ကျွန်..ကျွန်တော့်ကို ဘာလုပ်စေချင်လဲ? အခြားသူတွေကိုလည်း ခေါ်! အုပ်စုလိုက်လွှတ်လိုက်! မင်းလုပ်ရမှာကို လုပ်စမ်း! ဟုတ်-ဟုတ်ကဲ့၊ သခင် ဟုတ်ကဲ့ သူ့ကို အဲဒီတံခါးဝနားကို မရောက်စေနဲ့ သူ့ကိုတားကြ! သူ့ကိုတားကြ!!! စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထား အား..!!! တံခါး၀! နောက်ဆုံးတော့! အကူအညီကပုံစံတခုခု ဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံနဲ့လာလိမ့်မယ် ! ကူညီပါ! ကူညီပါ! ကူညီပါ! တံခါးကိုခေါက်ကြလော့..ခေါက်လျှင်ဖ ွင့်မည်.. တံခါးဖွင့်ပါ- ဟုတ်ကဲ့? ကျွန်တော့်နာမည် ခရစ်ရှန်ပါ၊ ကျွန်.. ဟုတ်ပြီ? ကျွန်တော့်ကို ဝင်ခွင့်ပြုပါ! အား.. စကားများလိုက်တာအား. ငါလုပ်နိုင်ပြီ!!! ငါလုပ်နိုင်ပြီ!!! အချိန်ခဏလေးငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ငါထင်ခဲ့တာ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် အို့ငါလုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်သူမှ ဒီမှာ မောင်းထုတ်မခံရပါဘူး မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ? ကျွန်တော့်ကိုပြောထားတယ် ကျွန်တော် ဒီကိုရောက်ရင် ဒါကကျွတ်သွားလိမ့်မယ် မှာတဲ့စကားက "အဲဒီနေရာမှာမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာက ိုပြောပြလိမ့်မယ်” လို့ ငါယုံကြည်တယ် ဒါဆို ဒါဆို ကောင်းပြီလေ
အို မဟုတ်သေးဘူး ကောင်လေး! မင်းက ခရီးရဲ့ အစပိုင်းမှာပဲရှိသေးတယ် ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုရင် ငါ.. အခု တဟုန်ထိုးပြေးသွားတော့ ဒါပေမယ့်--- သွား! မြန်မြန်! ဒါပေမယ့်- ဘယ်လမ်းကိုသွားရမလဲဆိုတာ -ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲ -ဖြောင့်တဲ့လမ်းကြောင်း အမြဲတမ်းဖြောင့်တဲ့လမ်း! ဒါက အနက်ပြန်သူဆီ မင်းကိုရောက်စေလိမ့်မယ် အခု သွားတော့! လာခဲ့ လာယူစမ်း အတောင်ပံနဲ့ကြွက်တွေ အမှိုက်ထုပ်တွေ ဒါယူလိုက် အား! အခု ငါအကူအညီတချို့ကို သေချာပေါက်သုံးရမယ် ဒါကဘာလဲ? ငါ့ကို မင်းနောက်လိုက်စေချင်တာလား? ခင်.. ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ? ချစ်လှစွာသော ကောင်လေး။ ဘာကြောင့်လဲ၊ ကျွန်မက အနက်ပြန်တဲ့သူပါ ကျွန်မက သင့်ကို မျှော်နေတာပါ ပြီးတော့ ကျွန်တော်.. ပုံစံတချို့နဲ့အိမ်ကို မျှော်လင့်ထားတာ အကြောင်းအရာတွေက သူတို့ကိုထင်ရသလို အမြဲမဟုတ်ဘူး၊ ခရစ်ရှန်၊ ပြီးတော့ တခါတလေ အသက်တာရဲ့ကျဆင်းခြင်းက သင့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး နေရာတွေဆီခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ် တံခါးမှူးက ရှင့်ကို ဒီမှာကူညီပေးမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါတ ယ်
ဘာအကြောင်းကိစ္စရှိသေးသလဲ? အလင်း.. ခင်ဗျားနောက်ကို လိုက်နေတဲ့ပုံပဲ ဒါဖြစ်သင့်တယ်--- ကျွန်မက အနက်ပြန်တဲ့သူလေ ကျွန်မက အရိပ်ရှိတဲ့နေရာမှာ အလင်းကိုသယ်ဆောင်ပေးတယ် သဘောပေါက်ပါပြီ.. သင်တကယ်လား၊ ခရစ်ရှန်? ကျွန်တော် တကယ်လား..? မြင်တယ် ပြီးတော့ နားလည်တာလေ? ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်အခု စပြီးနားမလည်တော့ဘူး ဒီကိုလာတဲ့ သင့်ရဲ့လမ်းမှာ အမှောင်ထဲမှာ လျှောက်ခဲ့ရတယ် ကျွန်မဒီမှာရှိနေတယ်၊ ခရစ်ရှန် သင်ရဲ့ကျန်နေသေးတဲ့ လမ်းခရီးကို အလင်းပေးဖို့ပါ သူတို့က ဘယ်သူလဲ? ငါတို့ကသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲက အလင်းရဲ့လမ်းအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦးဆောင်ပေးတဲ့ ဘုရင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ် ဘုရင်ရဲ့ကတိတော်တွေက သူတို့ဖက်မှာ အမြဲရှိပြီးတော့ သူတို့မျှော်ကြည့်တာက ထာဝရတည်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဖြစ်တယ် ဒါကို စိတ်ထဲမှာ ထားပါ၊ ခရစ်ရှန်၊ သင့်ကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကို ခေါ်ဆောင်မယ်လို့ ဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေကို သင်တွေ့ဆုံရလိမ့်မယ်
နောက်ပြီး သင့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာကတော့ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း! ပြီးတော့ ဒါက? ဒါက? အလိုဆန္ဒ သူလိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဂျီကျတောင်းဆိုနေတဲ့သူပေါ့ မဟုတ်ဘူး ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်! သည်းခံခြင်းက အခြားတဖက်မှာ ရောက်လာတဲ့အရာတွေကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတယ် သင်က ကြည့်ဖို့သင်ယူနေတာ မြင်နေရုံပဲမဟုတ်ဘူး၊ ခရစ်ရှန်! အရမ်းကောင်းတယ် ဒီမှာ အနက်ပြန်ခြင်းက ဒီလိုမျိုးပါ ကျွန်တော်က ဘုရင်ကျွန်တော့်ကို ကတိပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက် စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ဖို့ ကျေနပ်ရမယ် လမ်းခရီးကနေထွက်ဖို့ သွေးဆောင်ခံရဖို့မဟုတ်ပါ သင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေက သင့်ရဲ့လမ်းခရီးမှာ သင့်ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ် ပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာ သူကလှောင်ချိုင့်ထဲမှာဘာလို့ရှိနေ သေးတာလဲဆိုတာ သင်အံ့ဩနေတယ်ဆိုရင်၊ သူ့ကိုမေးလိုက်ပါ ဆရာ.. ဘာလို့ ဒီလိုမျိုးစိတ်ပျက်နေရတာလဲ?
မဟုတ်ဘူး.. တ-တဆိတ်လောက် ထပ်ပြောပါဦး? ဆရာ.. ကျွန်တော်မကြားရဘူး မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုက.. တကယ်စိတ်မသက်သာစရာပဲ စိတ်ပျက်ခြင်းက ဖြစ်နိုင်ချေရှိနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ သင်ကအနက်ပြန်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ် သင့်လမ်းခရီးမှာ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့လက်ဆောင် က ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ အနှစ်ချူပ်ပြောရမယ် ကြည့်ပါ မြင်ရုံပဲမမြင်ပါနဲ့ နားထောင်ပါ.. ပြီးတော့? ပြီးတော့ ကြားရုံပဲမကြားပါနဲ့? သင့်ခရီးဆက်သွားဖို့ အခု အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ
ဒီနေ့ သင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေကို ဆင်ခြင်ပါ ဒါတွေက သင့်ဘက်ကိုနှိုးဆော်ပေးပြီး သင့်နှလုံးသားက အလွန်တောင့်တနေတဲ့ နေရာဆီ သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ် သည်းခံခြင်းလမ်းကြောင်း အလိုဆန္ဒလမ်းကြောင်း ဘယ်တစ်ခုလဲ? ကြည့်ပါ၊ မြင်ရုံသာ ဒါက ငါ့အတွက်တော့ အဓိပ္ပါယ်သိပ်မရှိဘူး ဒါပေမယ့်..ငါ ဘုရင်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်ဖို့မမှားတော ့ဘူး ဒါက ဘယ်လိုပဲ ခက်ခဲတဲ့ပုံဖြစ်နေပါစေ ဒီလမ်းကျဉ်းတဲ့တောင်ကုန်းမှာ ငါဒီဝန်ထုပ်ကို ဘယ်လိုထမ်းနေရတယ်ဆိုတာ ငါမသိဘူး. ဒါပေမယ့်..ငါရှေ့ကိုဆက်ပြီးသွားမယ ်ဆိုရင်.. ဘုရင်က ငါ့ကို ခွန်အားပေးလိမ့်မယ်.. ဘာလဲ အို့ အို ဝမ်းမြောက်လိုက်တာ ငါနီးလာတဲ့အရာက ငါ့ရဲ့ ဝန်ထုပ်ကို နောက်ဆုံးတော့ လျော့သွားစေပြီ အို ဘုရင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကို လိုက်တာ ငါမှန်သွားပြီ.. ခြေတစ်လှမ်းတိုင်း.. ခြေတစ်လှမ်းတိုင်း.. သူကငါ့ကိုလွတ်မြောက်စေပြီ ငါလွတ်မြောက်ပြီ
ငါ လွတ်မြောက်ပြီ ငါ လွတ်မြောက်ပြီ အခုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာကို သင်နားလည်လား၊ ခရစ်ရှန်? သင်က ဘယ်သူလဲ? ငါတို့က ဘုရင်ရဲ့ ကောင်းကင်တမန်တွေပါ။ အခုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာကို သင်နားလည်လား? ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို သန့်စင်ပေးလိုက်ပြီ၊ ကျွန်တော့်ဘုရင်က ကျွန်တော်နဲ့ ဘယ်သူကမှမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ပ ေးခဲ့ပြီ သူက ကျွန်တော့်ဝန်ထုပ်ကို ဖယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ အခုအသစ်သောအသက်တာကို ပေးခဲ့ပြီ သူတကယ်လုပ်ပေးခဲ့တယ် အသစ်သောအသက်တာအတွက် အသစ်သောဝတ်လုံ၊ ဘုရင်ကသင့်ကို သူ့ရဲ့လူထဲကတစ်ယောက်အဖြစ်ပြုပေးခဲ ့ပြီ သင်က သူ့ရှေ့မှာ မင်းသားတစ်ပါးလိုလျှောက်ရပြီ၊ ခရစ်ရှန် ကျွန်တော့်နှလုံးသားက ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်နဲ့လေးလံတဲ့ ဝန်ထုပ်တွေကိုကျွန်တော့်ဆီကနေယူသွ ားခဲ့ပေးတယ် အဲဒီနေရာမှာ၊ ဒီလိုမျိုးကောင်းကြီးတွေ၊ အနှိုင်းအဆမဲ့
ဒီလိုမျိုး ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေ အခုက၊ လှပတဲ့နန်းတော်ကို ရောက်သည်အထိ သင့်ရဲ့ ခရီးကိုဆက်သွားပါ အဲဒီနေရာမှာ သင်က ပြန်လည်လန်းဆန်းပြီး ရှေ့မှာရှိတဲ့အရာတွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာ တစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူး ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်းမလုံလောက်ဘူး ကျွန်တော်တို့.. ကျွန်တော်တို့ သခင့်ကိုရှုံးစေပြီ ဖြစ်နိုင်တာက သူ့ကိုမေ့သွားကြလိမ့်မယ်.. ဖြစ်နိုင်တာ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကိုဖြစ်ခွင့်ပေးသင့်တယ် သူ့ဟာသူဖြစ်ပါစေ? ဒီအရူးက အရင်ကထက် ငါ့တို့အတွက် ပိုကြီးတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာပ ြီ ခြိမ်းခြောက်မှု?.. သူ့ကိုမေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူး.. တခြားသူတွေက တူညီတဲ့အဲဒီအရာကိုပဲ ကြိုးစားကြလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး သူ့ကို ရပ်သွားစေရမယ် ဒါပေမယ်.. သခင်.. သူကတံဆိပ်ကို ဆောင်သွားပြီ ငါ့ကိုအကူအညီမဲ့တဲ့သူလို့ထင်နေတာလ ား? သူတို့ရဲ့ခရီးမှာ ဒီအထိရောက်လာတဲ့သူတွေ လမ်းလွဲဖို့
ငါလုပ်ခဲ့တဲ့လူဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဆ ိုတာ မင်းမမြင်ဖူးဘူးလား? ဒီအရာကနေတဆင့်ငါဖြတ်သန်းတဲ့အချိန် .. ဒီခရစ်ရှန်၊ သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွေးအိုင်ထဲမှာ လဲလျောင်းနေရလိမ့်မယ်! နောက်ဆုံးတော့ ဒါက ဘာလဲ? ဒါ.. ဒါက ဘာလဲ? ဘာများလဲလို့ တောတိရစ္ဆာန်တွေပဲ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ငါဘာလုပ်သင့် ငါသွားရမယ်.. ရှေ့ဆက်ပြီး.. ကူ..ကူညီပါ.. ကူညီပါ.. လာပါ! လာပါ ကောင်းသောခရစ်ရှန် လာ အခု၊ အခု၊ ကောင်းသောခရစ်ရှန်! ခင်ဗျားက ကြီးမြတ်တဲ့ခွန်အားကို ပြလိုက်ပြီးပါပြီ ခင်ဗျားက ခင်ဗျားရဲ့ယုံကြည်ခြင်း စစ်ဆေးခြင်းကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ ကျော်လုနီးပါး.. ဒါပေမယ့် ကောင်းပြီ ကျွန်တော့်နာမည်ကစောင့်ကြည့်ခြင်း ပါ ပြီးတော့ ဒါကကျွန်တော့်အိမ်ပါ.. ပြီးတော့သင့်ရဲ့အိမ်! ကျွန်တော့်နှလုံးက တဒိန်းဒိန်းနဲ့ခုန်နေသေးတယ်! ကျွန်တော့်ရဲ့ အသစ်တွေ့ရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဆုံးရှုံးခါနီးဖြစ်လို့ကြောက်မိတယ်ကောင်းပြီ၊ ကြောက်̔ရွံ့တာတွေမခံစားဖို့ မင်းကသေမှပဲဖြစ်မယ်လေ
ဒါတွေက မင်းကို မတုန်လှုပ်စေနဲ့ အခု မင်းကငါနဲ့အတူရှိနေပြီပဲ .. ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့သမီးတွေနဲ့အတူ.. ..လိမ္မာပါးနပ်ခြင်း၊ဆင်ခြင်တွေးခ ေါ်ခြင်း ကြောက်ရွံ့ရိုသေခြင်းနဲ့ ချိုသောပေးကမ်းခြင်း ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်တို့မိသားစုကနေကြိုဆိုပါ တယ် ကောင်းသောခရစ်ရှန် ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုအတွက်ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော် ဒါမျိုးဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ခဲ့ဖူးဘူး ကောင်းကင်မြို့တော်ရဲ့ဘုရင်က ဒီအိမ်ကိုရှင့်လိုမျိုးခရီးသွားတွေပြန်လည်လန်းဆန်းစေဖို့ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တာ အခု ဒါက သင့်အိမ်ဖြစ်သလို ကျွန်မတို့အိမ်လည်းဖြစ်တယ် အခြားသူတွေလည်း ရှင်အခုခရီးထွက်နေတဲ့ တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲသွားတာ။ တခြားသူတွေရဲ့ပုံနမူနာက အခု သင်ကသူတို့ရဲ့.. ဘုန်းတန်ခိုးပြည့် ပေါင်းဖော်ခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြ စ်တဲ့ သင့်အတွက် ခွန်အားဖြစ်ပါစေ ရှင်တယောက်တည်းလျှောက်နေတာမဟုတ်တေ ာ့ဘူး အခု၊ ကျေးဇူးပြုပြီး စားပွဲဆီကို လာခဲ့ပါ.. ..ပြီးတော့ ဒါက ဒီလမ်းမှာ ကျွန်တော့်ကိုထားပေးတဲ့အရာတွေပဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောရမှာက ခြေလှမ်းတိုင်းက ကျွန်တော့်ကိုအသစ်သောအရာကိုသင်ပေး ပြီး အခက်အခဲတိုင်းက ကျွန်တော့်ကို ခိုင်ခံ့စေတယ်
ဘုရင်က ဘာမှ အလကားမဖြစ်စေဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်သင်ယူခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့၊ ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ် မကျိုးမကန်းရှိနေသေးတယ် ပြီးတော့ရှင့်မိသားစုရော ညီမလေး ကျွန်မက မေးရုံပဲမေးတာ၊ သူတို့ကိုမမြင်ရလို့ပါ.. ရှင့်နှလုံးသားထဲမှာ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ နောင်တတစ်ခုပါ ကျွန်တော် သူတို့ယုံကြည်စေဖို့ ပိုပြီးကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့ဖို့ဆန ္ဒရှိတယ် ဒီမှာ ရှင့်မျက်ရည်တွေကို ဝှက်ထားစရာမလိုပါဘူး ချစ်ရတဲ့ခရစ်ရှန် ရှင်က မိသားစုထဲမှာပဲလေ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုချစ်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကလေးတွေကိုလည်း အရမ်းချစ်တယ် ဒါက သူတို့အကြောင်းကိုပြောဖို့ကောင်းပ ါတယ် ဘုရင်ရဲ့ကတိတော်ကိုဆွဲကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲမှာ သူတို့ကိုသယ်ဆောင်လာတာပါ သူတို့ကလည်း နားလည်းပြီးလိုက်လာကြဖို့ ဒါမှမဟုတ် သူတို့မလိုက်လာဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော့်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို ့.. ဘုရင်က ရှင့်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကို သတိပြုမယ် သူတို့အတွက်ကျတဲ့ မျက်ရည်တစ်စက်က မပျောက်သွားဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်
ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါ ကောင်းသောခရစ်ရှန် သင့်ရဲ့ဝန်ထုပ်တွေကိုဘုရင်ရဲ့ခြေရ ှေ့မှာချထားလိုက်ပါ “သင်တို့ဆံခြည်တပင်မျှ သူမသိဘဲ မပျက်ဆီးရဘူး” အခုလာပါ.. ဒီည မင်းအနားယူဖို့အထူးနေရာတစ်ခုရှိတယ်မင်းရဲ့မောပန်းနေတဲ့ခေါင်း၊ နှလုံးသားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အနာ းယူဖို့ သူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ် ဒါပေါ့ သူကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကိုက်ညီရမယ် ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့တခြားအဝတ်တွေလို သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်ဘူး ဒါပေမယ့် ရှင့်ရဲ့ ခရီးနောက်တစ်ဆင့်နဲ့ပိုပြီးဆက်သွာ းဖို့ပဲ အခု၊ သူ့နဲ့လိုက်ပေးကြရအောင်.. အို မင်းတို့ အပင်ပန်းခံစရာမလိုပါဘူး.. အို့ အမလေး အို့ ဘုရားရေ ငါအဆင်ပြေတယ်.. တောင်ပေါ်တက်တာထက် အောက်ကိုကျသွားတာက ပိုအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ ငါမှန်းနိုင်ပြီ အရှက်ကွဲခြင်းချိုင့်ဝှမ်းဆီကို ကျသွားဖို့ ဘယ်သူမဆိုအတွက် ဘယ်သူ့အတွက်မဆိုခက်ခဲလှပါတယ် ပြီးတော့ သူတို့သွားရတဲ့အခါ.. သူတို့တယောက်တည်းသွားရတယ်
ဘာ ခုန ခင်ဗျားပြောလိုက်တာ... ဘာချိုင့်ဝှမ်း. အို ဒါက ဘာလဲ? ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ? ဒါဆို…. ဓားတလက်.. ဒိုင်းလွှား.. လက်နက်စုံ.. သူတို့ ငါ့ကို စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာပဲ ခွန်-ခွန်အား ခွန်အား ဘာကြောင့်လဲ ခရစ်ရှန်! မင်းဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ..ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့နေရ ာမှာ.. မင်းရဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အိမ်နဲ့ ချစ်စရာမိသားစုဆီကနေ အဝေးကြီးမှာ? ခင်-ခင်ဗျားကဘယ်သူလဲ? မင်းငါ့ကိုမမှတ်မိဘူးလား! ဘာကြောင့်လဲ၊ ငါက မင်းရဲ့မင်းသား! ..ကျွန်တော့်ရဲ့မင်းသား!? အခုတကယ်.. ဓားတစ်လက် မင်းမြင်ရသလိုပဲ.. ငါက လက်နက်မပါဘူး.. အခု.. .. ပြန်ကြရအောင်.. ပြန်ရမယ်? ခရစ်ရှန်နာနဲ့ သားလေးတွေ။ သူတို့မင်းကိုဘယ်လောက်လွမ်းနေသလဲဆ ိုတာ မင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး အဖေ အိမ်ပြန်လာတော့! ရှင်ပြန်သာပြန်လာခဲ့ရင်..
မင်းသူတို့ကိုလွမ်းနေတယ်၊ ဟုတ်တယ်မလား? ရှင်ဒီမှာသာရှိနေမယ်ဆိုရင်.. ငါလွမ်းတယ်. အဖေ အဖေဘယ်မှာလဲ? အိမ်ပြန်လာပါ! အို ခရစ်ရှန် ဘာကြောင့်လဲ ဒါပေမယ့် ငါကဘုရင်အတွက်ဒီလမ်းခရီးမှာရှိနေတ ယ်.. အို ခရစ်ရှန် ဘာကြောင့်လဲ ပြီးတော့ ငါ့ကိုဖျောင်းဖျနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အရမ်းမြင့်မြတ်တယ်! ငါ့ကိုယုံပါ၊ ငါလောက်မင်းကို ဘယ်သူကမှ မလေးစားဘူး ဒါပေမယ့် ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ.. မင်းက မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင ်တောင်.. မင်းချစ်တဲ့သူတို့တွေက ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲ? မင်းက မင်းကိုယ်မင်း ကယ်ကောင်းကယ်န်ိုင်လိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်..သူတို့ကောဘယ်လိုလဲ? မဟုတ်ဘူး မင်းငါနဲ့ပြန်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ် အခု မင်းရဲ့ဓားကို အောက်ချလိုက်ပါ သူတို့ရဲ့ အကြည့်တွေက အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ် ဒါကို စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါ၊ခရစ်ရှန် သင့်ကို မှန်တဲ့လမ်းကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်လိ ု့ ဟန်ဆောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ သင်တွေ့ရလိမ့်မယ် ပြီးတော့သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ့် လမ်းက.. ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ!
ဘာလဲ? ဘုရင်က ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး ငါလည်း သူ့ကိုယ်မပျက်ကွက်တော့ဘူး သင်ကလှည့်ဖြားသူ လိမ်လည်သူ၊ ကောင်းတဲ့အရာ မှန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလုယူသူပဲ တိတ်စမ်း! မင်းအောက်မှာ အစေခံခဲ့တာ ဒုက္ခဆင်းရဲကလွဲလို့ ဘာမှကောင်းတာမတွေ့ရဘူး! တိတ်စမ်း! ငါသစ္စာခံတာ ကောင်းကင်ဘုရင်နဲ့ပဲဖြစ်တယ် ဟုတ်လား? မင်းငါပြောတာကြားတယ်နော် ဒီခရီးမှာ မင်းက သူ့ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်တောင် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ? မင်းက မင်းရဲ့ဘုရင်အတွက် အသရေပျက်စရာတစ်ယောက်ပဲ သူရဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကပိုပြီးချိုမြိန် စေတယ် သင်က သင့်လက်အောက်ခံတွေကိုမမြင်ရတဲ့ကြိ ုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ထားတဲ့ လှည့်စားသူပဲ ဘုရင်က ငါ့ရဲ့ကြိုးတွေကို ချိုးဖျက်ပေးတယ်၊ အခု ငါလွတ်မြောက်ပြီ ငါသူ့နောက်ကိုလိုက်နေပြီ ဒါဆို မင်းရဲ့ခရီးကို စွန့်လွှတ်ဖို့ပြင်ဆင်တော့ ငါမင်းကိုကျိန်ပြောမယ်... ဒီထက်ပိုပြီးမသွားရတော့ဘူးလို့ မင်းကငါ့အပိုင်ပဲ ငါ့ကို မော်ကြွားမနေနဲ့ဦး၊ မကောင်းဆိုးဝါး ငါကလဲကျပေမယ့်.. ငါလဲကျမှာမဟုတ်ဘူး..ပြန်ထမယ်
မင်းငါ့ကိုပြန်တွေ့ရမယ်၊ ခရစ်ရှန်! လှိုင်းလုံးတွေက မင်းကိုထိန်းနိုင်တဲ့အချိန် သေခြင်းရဲ့အေးစက်တဲ့လက်က မင်းရဲ့ စုတ်ချာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလာရစ်ပတ်တဲ့အခ ျိန်ကျရင်.. ငါအဲဒီမှာရှိနေမယ် အား.. ထွက်သွားတော့ ထွက် ထွက်သွားတော့ သစ္စာရှိခြင်း? ပြီးတော့၊ မင်းက? ဒါဆို မင်းစာအုပ်တွေကို တွေ့ခဲ့တာပေါ့ စာအုပ်တွေကြောင့် ရောက်လာတော့မယ့်စစ်ပွဲအကြောင်းကို သင်ခဲ့ရတယ် ငါတို့မြို့ရဲ့ အစ.. ကျိန်ခြင်းခံရတဲ့ မြို့! မင်းနဲ့ငါအခုဦးတည်ခရီးထွက်နေတဲ့ သဘာဝအတိုင်းဆန့်ကျင်တဲ့ မြို့ အမြဲတမ်းတည်မယ့်မြို့ ထာဝရတိုင် ဧဝံဂေလိဆရာ မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်၊ ခရစ်ရှန်! သူက ကျွန်တော့်ကို လမ်းခရီးကိုပြပေးတဲ့သူပေါ့ ပြီးတော့ သူက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ရတနာတပါးပဲ၊ ပြီးတော့ သူ့အပေါ်ငါအကြွေးလည်းတင်ခဲ့ပြီ ပြောပါဦး၊ ဒီလမ်းခရီးကို ခင်ဗျားကို ဘာကရောက်စေတာလဲ ခင်ဗျားတို့အဖော်ပြုခြင်းရဲ့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း.. အခု၊ တခုခု စားကြမလား? ဟာ
နှစ်ဆသောကောင်းကြီးပဲ! ဟ! ပြီးတော့ ပိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဒါကလာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ဒါဆိုလာခဲ့၊ သူငယ်ချင်းရေ၊ ခဏလောက်နားကြပါ! ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ် ခင်ဗျားတို့ စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကို ကြုံတွေ့ရခဲ့တာတင်မက အဲဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဒါတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး လမ်းခရီးကို ဆက်သွားခဲ့ကြတယ် သရဖူက၊ ချစ်သောခရစ်ရှန်နဲ့ သစ္စာရှိခြင်း သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကို စောင့်နေပြီး ဒါကထာဝရတိုင်တည်နေမယ် ဒါပေမယ့် အကြံကိုလက်ခံပါသူငယ်ချင်းတို့ မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့လက်လှမ်းမမှီရာမ ှာမရောက်သေးဘူး -ပြီးတော့ -ပြီးတော့ ငါတို့ကို ဘာထပ်ပြောစရာရှိသေးလဲ? မင်း... အာ့ ခင်ဗျား ဒီမှာ လက်ဖက်ရည်တစ်ငုံ လာသောက်တာလောက်တော့ မဟုတ်ဘူး အခြားအကြောင်းရှိတယ် မဟုတ်လား? မင်း အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့တော့ ဆက်သွားလို့မျှော်လင့်လို့မရဘူး ဒါပေမယ့် အဲဒီအရာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ငါတို့သက်သေပြခဲ့ပြီးပြီ ပြီးတော့ အဲလိုသက်သေပြဖို့ အဖိုးအခပေးခဲ့ပြီ မဟုတ်ဘူး ဒါ ပြင်းထန်တယ်… ပိုခက်ထန်တဲ့ ခက်ခဲမှုတွေကို ငါဆိုလိုတာ… ဘယ်လိုမှ မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ ခက်ခဲမှုတွေ ဆိုလိုတာက…? မင်းတို့ မြို့တစ်မြို့ကို မကြာခင် လာရလိမ့်မယ်
အဲဒီမှာ အဖမ်းခံရလိမ့်မယ် အဖမ်းခံရမယ်? …ပြီးတော့ တစ်ယောက်ယောက် ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံး … ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သက်သေကို အသွေးနဲ့တံဆိပ်ခတ်ကြလိမ့်မယ် … ခင်ဗျားဖြတ်သွားရမယ့်မြို့က တမူထူးခြားတယ် အနတ္တပွဲတော်မှ ကြိုဆိုပါ၏ အဲဒါက ကောင်းကင်မြို့တော်ကို သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မကောင်းဆိုးဝါး အပေါလျူန်က တည်ဆောက်ထားတယ် မုန့်တစ်ခုလို့ ပြောနေတယ်လေ အဲဒီမြို့က ဘယ်တော့မှ မကုန်နိုင်တဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပတယ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီအထဲမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးကိုသွေးဆောင်ဖ ို့ ကြိုးစားတဲ့ အရာအားလုံးတွေ့ရတယ် ကံကောင်းခြင်းရေ ကြည့်… ငါဒီအရာတွေအပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှမျက်စိမကျခဲ့ဖူးဘူး ဒီမြို့ကနေတစ်ဆင့် မင်းတို့သွားရမယ် သူစိမ်းတွေ ခုလာကြ ငါတို့ရဲ့ ဝိညာဉ်ကို လာစမ်းပါဦး ဒါပေမယ့်သတိထားပါ ဒီသတိပေးမှုကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိ ုပြီးအရေးမစိုက်ပဲမနေပါနဲ့ မြို့ကိုမဝင်ခင်မှာ သင်တို့လုပ်ရမယ့်အရာတွေ နှလုံးသားမှာပြင်ဆင်ကြပါ မျက်စိတဖက်က ထာဝရကာလအပေါ်မှာ နောက်တဖက်ကလက်ရှိပစ္စုပ္ဗန်အပေါ်မ ှာထားပြီး လျှောက်လှမ်းရင်း ကျဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိလို ့ပါ
-ပြီးတော့ကြည့် -ပျော်စရာတွေလဲရှိတယ် ခရမ်း အဲ့မှာ အပြာ အစိမ်း ရွှေရောင် ခရမ်း ဒီအင်္ကျီကို မင်းမြင်ဘူးလား ခါးစည်းတွေ! စွပ်ကျယ်အင်္ကျီ မဟုတ်ဘူး ငါတို့ လိုချင်တဲ့အရာကို၊ မင်းတို့ဒီမှာမရောင်းဘူး ဒီမှာ ဆရာ ဒါက လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး ငါတို့ လိုချင်တဲ့အရာကို၊ မင်းတို့ဒီမှာမရောင်းဘူး ဒီမှာ ဆရာ ဒါက လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး သူပြောတာကို မကြားဘူးလား? ဒီမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ဒီလိုရပ်လိုက်ရတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ ဒီထူးဆန်းတဲ့လူစိမ်းတွေက သူတို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေက ဒီမှာ မရှိဘူးလို့ပြောနေကြတယ် အဲ့ဒီရဲ့ရလဒ်က သူတို့ ငါတို့ပွဲတော်ကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်တ ယ် ကောင်းပြီ ဒါဆိုတရားသူကြီးစီကို ဒါပေမယ့် ငါ့တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေ တဆိတ်လောက် လမ်းဖယ်ပေးပါ လမ်းဖယ်ပေးပါ ငါပြောနေတယ် မဖြစ်နိုင်တာတွေ ဖယ်ပေး ငါ့ကို၀င်ခွင့်ပေး ဒါက ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ? ငါတို့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို အနှောင့်အယှက်ပေးတာ ဘာလဲ? ဘာလဲ? ဒီထူးဆန်းတဲ့ လူစီမ်းတွေ! သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲ ဘာမှမလုပ်ဘူး! ဘာမှမလုပ်ဘူး! အတိအကျပဲ! သူတို့ ဘယ်နေရာမှာမှ မပါဝင်ကြဘူး သူတို့ဘာကိုမှ မဝယ်ကြဘူး!
သူတို့က ဘာမှကိုမလုပ်ကြဘူး! ကောင်းပြီ ဘာမှမလုပ်တာကြောင့်မင်းတို့က ငါတို့ရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုအနှောင့်အယှက် ပေးတယ်! လုပ်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်! ခုံသမာဓိအဖွဲ့ကိုခေါ်ပါ! ခုံသမာဓိအဖွဲ့! - - အားလုံးရောက်ပါပြီ! ကောင်းပြီ! ငါတို့မှာ သက်သေတွေရှိလား! မနာလိုခြင်းနဲ့ ကျော်ကြားမှုရခြင်း! သင်တို့ ဒီထောင်သားတွေကို သိပါသလား? ဟုတ်ကဲ့၊ အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက်ကပါ ပြီးတော့ ဘာလို့သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တရားစွဲတာလဲ? သူတို့က သူတို့လိုချင်တာကိုပြောတယ် ငါတို့မှာမရှိဘူး လေ ပြီးတော့ ဒါကဘယ်လိုလုပ်ပြီ ဖြစ်နိုင်မှာလဲ??? ငြိမ်သက်ခြင်း ၀မ်းမြောက်ခြင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တကိုယ်ကောင်းမဆန်ခြင်း စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်း ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှမပျောက်ကွယ်မယ့် သရဖူ- အခြားသောအရာများထဲမှာ အာ....ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ တိတ်တိတ်နေကြပါ! တရားရုံးမှာ တိတ်တိတ်နေကြပါ! လာကြ!လာကြ! ငါတို့အဲဒီလိုပစ္စည်းမျိုး ရောင်းလို့လား? မရောင်းဘူးပေါ့! ဒါက အနတ္တပွဲတော်လေ စိတ်ကူးယဉ်ပွဲတော်မဟုတ်ဘူး ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းမျိုးဘယ်မှာရနို င်မလဲဆိုတာ ငါတို့သိတောင်မသိဘူး! ကောင်းပြီ၊ ငါ့ကို သတင်းပေးကြတာက မင်းတို့ပြောတဲ့ အဲဒီလိုပစ္စည်းမျိုးက ရောင်းလို့မရနိုင်ဘူး အဲဒါမှအပ ငါတို့အံ့ဖွယ်ပွဲတော်မှာ အများကြီးတွေ့နိုင်တယ်
ဒါဆို သင်ကအမှန်အတိုင်း ပြောတာပဲ! အဲဒါတွေက ဒါတွေကိုယူဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကို ပေးတဲ့ ဘုရင်ဆီကနေပဲ ရရှိနိုင်တယ် ဒါတွေက ငွေဒင်္ဂါးတန်ဖိုးနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပေမယ့် နှလုံးသားကို အရှုံးပေးခြင်းဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပေါ ့! ဒီဟို အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေက ရှိကောရှိနေတယ်ဆိုတာ မင်းတို့မှာ သက်သေရှိတယ်ပေါ့? ဘုရင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဒါဆို ကောင်းပြီ… ငါတို့ကို အဲဒါတွေပြပါ ဒါတွေက ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့် ဒါတွေက နှလုံးသားထဲမှာ စွဲကိုင်ထားနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးသောအရာတွေပါ ပြီးတော့ အခက်အခဲကြုံတဲ့အချိန်မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောအရာ ပြီးတော့ သူတို့ထိုက်တန်တာက သက်သေအထင်ရှားဆုံးပဲ ကောင်းပြီ ဒါဆို.. ကျွန်တော် အကြံပေးပါရစေ၊ ကျွန်ုပ်သခင ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိမနေတဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်မှာပါ? အကြံပေးမယ် ဘာလဲ? ဘာကြောင့်လဲ တကယ်တော့ ခက်ခဲမှုတွေပေါ့ ခက်ခဲမှုတွေ! ခက်ခဲမှုတွေ?... ရက်စက်မှုတွေ၊ ခုံနားကိုလာခဲ့စမ်း! မင်းဘာတွေတွေးနေတာလဲ? ပွဲတော်က အနှောင့်အယှက်ပေးခံရပြီ! ဒါဖြစ်စေတာက မလုံလောက်သေးဘူးလား? ငါက တရားစီရင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ! ဒါပေမယ့် မြို့သူမြို့သားတွေမဟုတ်ဘူး!. မင်းဘာတွေပြောနေတာလဲ? ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်ချက်စကားတွေကို သူတို့ပြန်တုံ့ပြန်နေကြတာကို ခင်ဗျားမမြင်ဘူးလား?
ကျွန်တော်ပြောတာ၊ သူတို့ကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပွင့်ပွင်လင်းလင်း အပြစ်ပေးလိုက် ဒီအရူးနှစ်ကောင်ကအဲဒီအရာတွေဘာမှမပ ိုင်ဘူးဖို့ ဆိုတာကို လူတွေကို သက်သေပြလိုက်ပါ.. အဲဒီ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း တကိုယ်ကောင်းမဆန်ခြင်း ဟိုဟာဒီဟာဆိုပြီး သူတို့ ကြွားဝါနေတဲ့အရာတွေ.. ဒါဆို ငါတို့မြို့သူမြို့သားတွေက ဘယ်အရာတစ်ခုကိုမှ မပျောက်သွားဘူးဆိုတာ သက်သေဖြစ်မယ် အို.. ငါနားလည်ပြီ! ငါတကယ်လုပ်မယ်!.. ဒါဆို ကောင်းပြီလေ! သက်သေကို မတင်သွင်းမချင်း ငါ့ရဲ့တရားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအချိန်ရ ွှေ့ဆိုင်းထားမယ် အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းထားမယ် ခက်ခဲမှုတွေကို စတင်ပါ… ပြီးတော့ ပွဲတော်ကို ပြန်စပါ! မင်းဘာလုပ်တာလဲ? ငါ့ကိုလက်လွှတ်စမ်း! - သူတို့က ဘာလဲ ပစ်တဲ့အရာတိုင်း၊ ကျောက်ခဲတိုင်း စော်ကားမှုတိုင်းကို ယူပါ.. ပြီးတော့ သုတို့လက်တုံ့ပြန်တာ တကြိမ်တည်းမဟုတ်ရဘူး? သူတို့က သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်သူတွေကို ပြန်ပြုံးပြနေသေးတယ် မဟုတ်ဘူး! ဆိုးရွားလိုက်တာ! ဘယ်လိုတောင်သဘာဝမကျတဲ့သူတွေလဲ! မကောင်းဆိုးဝါးအစစ်အမှန်ပဲ! ငါပြောတာက သူတို့ကိုငါတို့ မြန်မြန်ရှင်းထုတ်လေ၊ ပိုကောင်းလေပဲ! ဒါက တညီတညွတ်တည်းပဲ! ထောင်သားတွေကို အထဲကိုခေါ်ခဲ့ပါ! သွား...သွား...သွား... သွား...
သက်သေတွေက ငါတို့ကျေနပ်လောက်တဲ့အထိတော့မဟုတ် ဘူး! ငါတို့ရဲ့အမူအရာက ဆက်ထိန်းပေးနေတာ ငါတို့ရဲ့ အမိန့်ချမယ် ငါမင်းတို့ကို သေဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်! ဘာ! သူကနေစမယ်! ခင်ဗျားမလုပ်နိုင်ဘူး! ကောင်းပြီး ငါအခုလုပ်လိုက်ပြီ! မဟုတ်ဘူး! ကောင်းပြီ အားလုံး! ပွဲတော်ကို ပြန်သွားကြပါ! သစ္စာရှိခြင်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ ချစ်တဲ့ညီအစ်ကိုရေ! ဒါက ဧဝံဂေလိဆရာက ငါတို့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာပဲ ဒီနေ့ ငါ့ရဲ့အသွေးနဲ့ ငါ့သက်သေကို တံဆိတ်ခတ်ပြီ သစ္စာရှိခြင်း! မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ကိုမင်းထက်အရင်စေလွှတ်တာကြောင့်မငိုပါနဲ့၊ ချစ်ရတဲ့ညီအစ်ကို အမှန်တရားမှာပဲနေပါ ငါမင်းကို မြင်ရသေးတယ် မဟုတ်ဘူး ငါမင်းကို မြင်ရသေးတယ်.. မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ မင်းရဲ့အလှည့်က မနက်ဖြန်ကျရင်ရောက်လာမှာပါ! သူ့ကိုအဝေးမှာ ထားလိုက်! သစ္စာရှိခြင်း! သစ္စာရှိခြင်း! သစ္စာရှိခြင်း ငါချစ်ရတဲ့ညီအစ်ကို သစ္စာရှိခြင်း! ကျွန်တော့်ကို ခွန်အားပေးပါ၊ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျေးဇူးပြုပြီး အစုတ်ပဲ! ပွဲတော်က ပြန်စနေပြီး၊ ငါတို့ကဒီမှာသေဖို့ကောင်းတဲ့ဒီလူက ိုစောင့်ကြပ်နေရတာ
မင်း ငါ့ပါးစပ်ကနေထွက်တဲ့စကားကို မှတ်ထားပါ ငါမှာအကြံတစ်ခုရတယ် မင်းကသွားပြီးတော့ ပွဲတော်မှာ သွားပျော်နေလိုက်ပါ ငါဒီမှာနေပြီး စောင့်နေလိုက်မယ် ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးပျောက်နေတာက အသုံးမဝင်ဘူး နောက်မှ မင်းပြန်လာခဲ့၊ ငါတို့နေရာပြန်လဲမယ် ငါ.. မသိဘူး ကြည့်လေ! ဘယ်သူကမှသိမှာမဟုတ်ဘူး မင်းကဘာမှမပြောနဲ့ ထပ်မပြောနဲ့တော့! ဟူးရေး! ခဏနေ ပြန်တွေ့မယ်! ဟင် ဟွန့်? ဟေး! မလုပ်ပါနဲ့! ကျေးဇူးပြုပြီး! ခင်ဗျားက အဲဒီမြို့က အစောင့်ထဲကတစ်ယောက်မဟုတ်လား! ငါက ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး! ငါလည်း ပြန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး ငါက မင်းကို ဖမ်းဖို့ဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး ငါက မင်းနဲ့အတူသွားဖို့ ရှိနေတာပါ ငါ မင်းရဲ့အဖော်ပြောတာကို ကြားတဲ့အခါ- သစ္စာရှိခြင်း ဟုတ်တယ်၊ သစ္စာရှိခြင်းက ပြောတာကိုငါကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒါကငါ့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ် ဒီလိုမျိုးခံစားရတာ ဒီအနတ္တပွဲတော်မှာ ငါတစ်ယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူး အခြားသူတွေလည်းရှိတယ် ဖြစ်နိုင်တာက လမ်းခရီးက မြို့ကိုဖြတ်ပြီး ဦးတည်နေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်မယ် ဒါဆို တခြားနေထိုင်နေတဲ့သူတွေက ခင်ဗျားလိုမျိုးလူတွေကို ကယ်တင်နိုင်မယ် မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်အားလုံးကို ထားခဲ့လိုက်ပြီ ကျွန်တော်ပြန်မသွားနိုင်တော့ဘူး ဒါဆိုခင်ဗျားက ကျွန်တော်နဲ့အတူသွားရလိမ့်မယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အခုပဲနားလည်လိုက်တာ အခုထိ ခင်ဗျားရဲ့နာမည်ကိုမသိရသေးဘူး မျှော်လင့်ခြင်း ဒါဆို မင်းနာမည်ကပြောသလိုပဲ ဒီညတော့နားလိုက်ပါ၊ ရဲရင့်တဲ့မျှော်လင့်ခြင်း မနက်ဖြန်ကျရင် ငါတို့ ငါတို့ဘုရင်ဆီကို ခရီးဆက်ကြမယ် ငါချစ်ရတဲ့ညီအစ်ကို သစ္စာရှိခြင်း ခင်ဗျား သေတာအလကားမဖြစ်စေရပါဘူး ဒီလမ်းက နည်းနည်းကျောက်ပေါတယ် ဒါပေမယ့် ကြည့်ပါဦး! လမ်းကြောင်းရဲ့ဘေးဖက်ကနေ လမ်းလျှောက်ဖို့ကနေ ငါတို့ကို ဘာက ဟန့်တားနေတာလဲ? ဒါပေမယ့် ဒါက ငါတို့ကို လမ်းခရီးအပြင်ဘက်ကို ဦးတည်စေတယ်ဆိုရင်ကော? ဒါကဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? ဒါက အပြိုင်သွားလို့ရတယ်! ကြည့်လေ! ဘေးချင်းကပ်လျက်ပဲလေ မင်းမြင်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးအထိ! ငါတို့ ဟိုကနေဖြတ်လျှောက်သွားရင်သေချာတယ် ၊ ငါတို့ နံရံပေါ်ကနေ အပေါ်တက်ပြီး၊ ဒီတောင်တက်လမ်းတခုလုံးကို ရှောင်န်ိုင်တယ်၊ ငါ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့! ငါလမ်းကြောင်းတွေကိုတောင် နောက်ထပ်ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး။ ငါတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းကို ငါတို့ပြန်လှည့်ရလိမ့်မယ် ငါဘယ်တော့မှမတွေးမိခဲ့ဘူး- အို မဟုတ်ဘူး! ငါမသိတော့ဘူး၊မျှော်လင့်ခြင်း! ငါတို့ ပြန်လှည့်ဖို့လိုတယ်လို့ တကယ်ထင်တယ်။ ငါတို့ အခုဘယ်လမ်း သွားနေသလဲဆိုတာကိုတောင် မမြင်ရဘူး ကြည့်ဦး! အဲဒီမှာ ခဏလောက် အကာအကွယ်သွား ယူရအောင် ငါတို့ဒီအပြင်ထွက်ဖို့ ဒီကနေစောင့်နိုင်တယ် ဒါကခဏနေ ပြီးသင့်နေပြီ လာလို့ဒီမှာ လာရှိနေတာလဲ?
မင်း ဒီကဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး မင်းရဲ့အပြစ်တွေဘယ်လောက်များလဲ မင်းမှားခဲ့တယ် မိုက်မဲခဲ့တယ် ဒါ.. ဒါဘယ်လောက်တောင်ကြာပြီလဲ? ခြောက်ရက် အစာမရှိဘူး၊ ရေမရှိဘူး.. ဒါတွေအားလုံး ငါ့အပြစ်တွေပါ! ငါတို့ ဒါကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လေ ဒါပေမယ့် ဒါငါ့ရဲ့အကြံလေ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကဒါကိုသဘောတူခဲ့တာ ခင်ဗျား ဒါကိုခင်ဗျားစိတ်ကနေထုတ်ဖို့ကြိုး စားရမယ် တချက်ထဲနဲ့သေပြီ ပျက်ကိန်းဆိုက်ပြီ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် ပျက်စီးကိန်းကြုံနေပြီ ဘာလဲ? ဟိုအောက်မှာ အရိုးတွေကို ခင်ဗျားမမြင်ဘူးလား? ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူး! ငါတို့သေပြီ။ သူနောက်တခေါက်ပြန်မဆင်းလာဖို့ပဲ ငါတို့ မျှော်လင့်ရအောင် အိုး မဟုတ်သေးဘူး သတ်သေလိုက်ပါ ကျွန်တော်ဒီထက်ကြာကြာတောင့်ခံနိုင ်မယ်လို့မထင်ဘူး ဘာလဲ? မင်းအသက်ရှင်နေသေးတယ်? ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကို ငါမင်းကိုပေးခဲ့တယ်!
ဓားတွေ! တင်းပုတ်တွေ! ကြိုးတွေ! ငါဘာတွေထပ်လုပ်နိုင်သေးလဲ? ဘာကြောင့် မင်း မင်းကိုယ်မင်းဝင်ပြီးမလုပ်တာလဲ? အခု မင်းငါ့ကို စိတ်ပျက်... ဘာဖြစ်တာလဲ? သူမေ့လဲကျသွားတာလား။ နောက်တခေါက်မဖြစ်နဲ့!!! အို သွားပါပြီ ငါ ငါ့အမေက နင့်ကိုလက်ထပ်ဖို့ သတိပေးတုန်းက သူ့စကားကို နားထောင်ခဲ့သင့်တယ်! ပိုကောင်းတဲ့လူ့ဘီလူးတစ်ယောက်ယောက ်ကို ရွေးနိုင်ခဲ့တာပဲ ငါအရမ်းလှခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး.. ငါက ပိုလှတဲ့တစ်ယောက်ကို ရွေးခဲ့ရမှာ.. ငါရွေးခဲ့တယ်.. အခုတော့ကြည့်ပါဦး..အဖွားအိုကြီးလိုမေ့လဲနေတာ ငါက နည်းနည်းလေးပဲ ဆွပေးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖြစ် တယ်! ဘာကြောင့် ငါက.. အား..! ကောင်းပြီ သူက ငါတို့ကို ဘာလို့ မသတ်ရတာလဲ? သတ်လိုက်ရင်ပြီးနေတာကို မင်းအပြစ်ဘယ်လောက်များလဲ ဘယ်လောက်မိုက်မဲလဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမသတ်နိုင်လို့ပဲ! ဘာလဲ? သူရဲ့လက်ကိုမမြင်ဘူးလား? သူရဲ့လက်ချောင်းသေးလေးနဲ့ ငါတို့ကို ကြိတ်ခွဲနိုင်တယ်! ဒါကဒါပေါ့.. သူတို့လုပ်နိုင်တယ်.. ဒါပေမယ့် သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူး!
ဒါကိုငါအရင်ကဘာလို့မမြင်ခဲ့ရတာလဲ? မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ငါတကယ်နားမလည်ဘူး ကြည့် အပေါ်ကို.. မျက်နှာကြက်နားလေးမှာ! မင်းဘာမြင်လဲ? ဦးခေါင်းခွံတွေ၊ .. ဦးခေါင်းခွံကြီး၊ ပိုကြီးတဲ့ဦးခေါင်းခွံ.. မဟုတ်ဘူး၊ အလယ်မှာ၊ ကုတ်အကျီ ဒါက ဒီနယ်မြေရဲ့ နာမည်ပဲ- ဒီရဲတိုက်။ စိတ်ပျက်ရာနေရာ။ စိတ်ပျက်ခြင်းရဲတိုက်! ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲ သူတို့က ငါတို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို့ လိုချင်တာ! ဒါကြောင့်မို့ ငါတို့နှစ်ယောက်ထွက်လို့မရတာ! နေဦး.. ငါနားလည်တယ်လို့မထင်မိဘူး။ လူဘီလူးကြီးက ဘာတွေပြောခဲ့တာလဲ.. ငါမင်းတို့ကို အလုပ်ပြီးဖို့ အားလုံးကိုပေးခဲ့တယ်။ မင်းမမြင်ဘူးလား? သူတို့မသတ်နိုင်ဘူး.. .. သူတို့က မင်း ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ဖို့ အခြေအနေတွေကို အဆိုးဆုံးဖြစ်အောင်ပဲ ဖန်တီးနိုင်တယ်.. မင်းအတွက် လွတ်မြောက်ဖို့ လမ်းတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိနေတယ်၊ ဟုတ်တယ်မလား? အပြင်ထွက်ဖို့ လမ်းတစ်ခုခုတော့ရှိနေမှာပါ! ရှိနေမှာပါ! မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး! မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး! မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး! ဒါက ငါပဲ လှောင်ချိုင့်ထဲကလူက ငါပဲ။ အခုငါက အမှောင်ထဲက တစ်ယောက်ပဲ စိတ်ပျက်ခြင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်က ဘာလဲ?
ငါမသိဘူး.. မျှော်လင့်ခြင်း! ဒါကဘာလဲ? ထွက်မယ့်လမ်း! ရှုး.. အခုတိတ်တိတ်နေ။ နည်းနည်းလေးထပ်ပြီး ထပ်ပြီးတော့ ငါတို့လုပ်နိုင်ပြီ! မျှော်လင့်ခြင်း! ဒါက ဘာလဲ? အိုး.. နင်က ဘာအတွက်မှမကောင်းဘူး.. စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထား!ငြိမ်ငြိမ်ထား. . သူ့ကို မဆွပေးမိပါစေနဲ့။ ဝတုတ်ဝက်ဝံလေး! အို..နှုတ်ခမ်းမွှေးဘောင်းဘီလေးရေ !.. ဟွန့်..ဟွန့်? ထောင်သားတွေ.. သူတို့ထွက်ပြေးသွားပြီ။ ဘာ… မြန်မြန်! ရှင်က သူတို့ကို ချယ်ရီနှုတ်ခမ်းလေးတွေရစေပြီ! ဒါမှမဟုတ် နင့်လည်ပင်းကိုဖက်ထားမယ်! ဒီနေရာကို ပြန်လာခဲ့! အား..! ဒါကောင်းတယ် အချစ်ရေ! ရှင်လုပ်တာအရမ်းကော်းတယ်! တကယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်! အိုအချစ်.. အိုအချစ် ..အို မြန်မြန်! သူတို့ကိုမြန်မြန်ဖမ်း ပိတ်ဖုံးနေတဲ့အရူးရဲ့! ဒီလမ်း! ဒီလမ်း!
ငါ့အမေစကားကို ငါနားထောင်ခဲ့သင့်တယ်၊ နားထောင်သင့်တယ်! ဒါပေမယ့် မဟုတ်ဘူး..! ပိုအရည်အချင်းရှိတဲ့ လူဘီလူးတစ်ယောက်ယောက်ကိုပဲ ရွေးနိုင်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် မဟုတ်ဘူး.. ငါက လှတဲ့ လူ တစ်ယောက်ကိုပဲ ရွေးရမှာ၊ ငါရွေးခဲ့တယ်! လှပြီးရူးတဲ့သူ၊ လှပြီးအနံ့ဆိုးတဲ့သူ! ဘာမှ ကောင်းတာမရှိဘူးအခု ငါ နင့်ကိုမြေကြီးပေါ်ကနေသယ်ဖို့ ညအိပ်ဝတ်စုံနဲ့ပဲဆင်းသွားရမယ်၊ ဘာမှ ကောင်းတာမရှိဘူး ဒီလူ့ဘီလူးကြီးတော့ သူ့ရဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ မိန်းမဆီကနေ ရင်ဆိုင်ရမယ့် ဒုက္ခတွေကို မင်းတွေးနိုင်သလား? သူ စိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်၊ ဒါကတော့ အသေအချာပဲ! ဘာဖြစ်တာလဲ? ငါလည်းမသိတော့ဘူး။ လမ်းကြောင်းက ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့်ပုံပဲ။ ဒါပေမယ့် သင်တို့ကို ဆက်ပြီးလမ်းပြနေဦးမယ် ဘုရင်ရဲ့သာယာကြည်နူးဖွယ် တောင်တန်းကနေကြိုဆိုပါတယ် ရောက်လာမယ့်အရာတွေရဲ့ အမြည်းပေါ့ ကျွန်..ကျွန်တော် အို.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကြင်နာတဲ့ သိုးထိန်း ကျွန်တော့်နာမည်က- ခရစ်ရှန် ပြီးတော့ သင်က မျှော်လင့်ခြင်း၊ သင်တို့ကိုသိတယ်.. ပြီးတော့ ချစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါဦး.. ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားကို သိလား? တစိတ်တပိုင်းပေါ့၊ သင်တို့ဇွဲရှိရှိနဲ့ရှာဖွေနေခဲ့တဲ့အဲဒီမြို့တော်ရဲ့ မြင်ကွင်းအတွင်းမှာ သင်တို့ရှိနေပြီဆိုတာ ကြားရရင် သင်တို့ဝမ်းသာကြည်နူးရမှာပါ
ပြီးတော့.. သင်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲလည်းခံစားပြီးရ ှာခဲ့တဲ့နေရာ ဒါက အမှန်တကယ် သတင်းကောင်းပဲ.. ပြီးတော့ ကျန်တဲ့လမ်းခရီးက.. အရမ်းပဲအန္တရာယ်များသလား? ဒီအသိပညာက အခုအတွက် လုံလောက်ပါစေ၊ သင်က တယောက်တည်းလျှောက်နေတာမဟုတ်ဘူး ဘုရင်က သင့်ကို လမ်းပြနေတယ်.. သိုးထိန်းက သူရဲ့သိုးတွေကိုလမ်းပြသလိုမျိုးပေ ါ့။ သူကအမြဲတမ်းရှေ့ကနေသွားတယ်၊ သိုးတွေရဲ့ မြင်ကွင်းကနေထွက်သွားရင်တောင်မှပေ ါ့ ကျန်ရှိတဲ့လမ်းခရီးအတွက် မြေပုံတစ်ခုကို ငါပေးမယ် မြှောက်ပင့်တဲ့သူကို သတိထားပါ ဆွဲဆောင်ဖမ်းစားနိုင်တဲ့မြေပြင်မှာမအိပ်ပါနှင့် ..မြို့ရဲ့ အလင်းကို သင့်ရဲ့ရှေ့မှာအမြဲ ဆက်ထားပါ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါ့မယ်၊ ကြင်နာတဲ့သိုးထိန်း အခု၊ ကျေးဇူးပြုပြီး.. ဒါက ဦးတည်နေတဲ့လမ်းခရီးလား သူဘယ်ကို ရောက်သွားတာလဲ? သူက မြေပုံတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောခဲ့တာ သူကမင်းကို အဲတာပေးခဲ့လား ငါလည်း မင်းကို အဲဒီအကြောင်းကိုပဲမေးမလို့ပဲ အလား၊ အဲဒါက အခုပဲ အသုံးဝင်လာနိုင်တယ် ဘယ်ဦးတည်ရာလမ်းကို သွားရမလဲ ငါမသိတော့ဘူး ကောင်းပြီ၊ ဒါက မြင်ကွင်းတစ်ခု မဟုတ်လား! ခရီးသွားတစ်ယောက်က တခြားခရီးသွားတွေကို ဒီလောက်ဝေးဝေး တွေ့ဖို့ဆိုတာ နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါပြောရဲတယ် ငါ ကောင်းပြီ ငါကမင်းတို့ကိုတွေ့ရတာ ငါ့ရဲ့ဘေးမှာ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အတူ ငါကိုယ်တိုင်ရှိနေတာပဲ!
ကျွန်တော်က ခရစ်ရှန်ပါ၊ ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း! ဒီလိုမျိုးနာမည်တွေ! ဒါတွေက သင်တို့ရဲကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေတာပဲ၊သေချာတယ် သင်တို့ကောင်းကင်မြို့တော်ကိုသွား နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်? ဒါပေါ့ ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ် ဒါဆို ငါတို့ အတူသွားကြတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မြို့ရဲ့အလင်းက ဟိုဘက်အပေါ်ကနေလာနေတယ်လို့ထင်ရတယ် နော် ဒါကထင်ရတာပဲလေ လာခဲ့၊ အခုလာခဲ့ကြ! ငါဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ ငါအတိအကျသိတယ်! ငါက အကျင့်စရိုက်တွေရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်သူပေါ့၊ ငါက ငါ့လိုတူညီတဲ့ဆက်ကပ်နိုင်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းဖို့ပဲ လက်ခံတယ် ကေင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိဖို့ကြိုစား ခဲ့ကြတယ် ကျွန်တော်တို့ တိုက်မိပြီးလဲကျခဲ့တာတွေရှိပေမယ့် ဒါပေမယ့်၊ ခရစ်ရှန်က အကျင့်ကော ခွန်အားပိုင်းမှာကော သာလွန်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ထက်သူ့ရဲ့လမ်းခရီးကိုပိ ုပြီးစောစောအစပြုခဲ့တာ ကျွန်တော် သူ့ကိုအပြည့်အဝလေးစားတယ် အပြည့်အဝလေးစားတယ် ဒါတွေကို ကြားရတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်းလေးစားတယ်! အို အခုလာခဲ့! ငါက အကျင့်ကောင်းရဲ့စံနမူနာ နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တာ တွန့်-တွန့်! မင်းက အရမ်းရိုးအတာပဲ ငါ့ကို မင်းရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ စွန့်စားမှုတွေထဲက
အတိုအထွာလေးတွေ ဝေမျှပြောပြပါဦး၊ ဒါဆို ငါက မင်းကိုထာဝရအကြွေးတင်နေမှာပါ! ကောင်းပြီလေ ငါမသိတော့ဘူး.. အများကြီးရှိတယ်! အား! ဒီလိုမျိုး နှိမ့်ချတာ! သူက မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ရွှံ့အိုင်ကနေရှင်သန်ခဲ့တယ် ဒါက စက်စုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရွှံတွေလေ! ပြီးတော့ အရှက်ကွဲခြင်းချိုင့်ဝှမ်း! အဲဒီမှာ အများကြီးက ရူးသွားကြတယ်လေ! ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပျက်ခြင်းရဲတိုက်ကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်! အနည်းစုက အပြီးသတ်ခံရပုံပဲ အဲဒီမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့အရိုးတွေကို အကဲဖြတ်ကြည့်ရတာ၊ ထပ်ပေါင်းထည့်ရရင်ပေါ့! ငါတော့ မင်းခြေရင်းမှာ လဲကျသင့်ပြီ! အို ငါအပေါလျူန်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်၊မင်းသိလား! ကောင်းပြီ.. မင်းကအကြီးမြတ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလား.. အား..!!! ငါပြောသင့်တာ အကြီးမြတ်ဆုံးအရူးလို့! မင်းက? အံ့ဩသွားလား? ငါတို့က အလွယ်တကူအရှုံးပေးမယ်လို့ မင်းထင်နေတာလား.. ဒီကြိုးတွေကို တွေ့လား? ဒါတွေက မင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကြွားဝါခြင်းတွေနဲ့ ရက်ထားတာလေ! ဒါတေကို အကဲခတ်ကြည့်ရတာ၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မာနတွေက မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကနေ မင်းကိုဝေးကွာစေမှာ ငါကြောက်တယ်! ငါတို့သွားခွင့်ပေး! သနားစရာ မင်းရဲ့ဇနီးဆီကို စကားတောင် ပါးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး.. ဒါမှမဟုတ် ငါပြောရမှာက- မုဆိုးမ? ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား မဟုတ်ဘူး! မြှောက်ပင့်ပေးသူ ဘာလဲ? သူက မြှောက်ပင့်ပေးသူပဲ၊ ငါတို့ သူ့ရဲ့ထောင်ချောက်မှာပဲ ချက်ချင်းနင်းမိသွားပြီ! ငါဘယ်တော့မှများ သင်ယူနိုင်မလဲ! ငါတို့ နောက်တခါ စိတ်မပျက်ကြပါစို့။ ခရစ်ရှန်! ဒါပေမယ့် အခု ငါလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ရပ်စမ်းပါ ကျေးဇူးပြုပြီး မျှော်လင့်ခြင်းကို လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ ငါတို့ သိုးထိန်းပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကို နောက်ပြန်စဉ်းစားရမယ် မြှောက်ပင့်ပေးသူကို သတိထားပါ အဲဒါမတိုင်ခင်… သင်တစ်ယောက်တည်းလျှောက်နေတာမဟုတ်ဘ ူး အခုသင်တို့ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး အား! ဒါက နာကျင်ခဲ့ရတယ်! တခါတရံမှာ၊ မျှော်လင့်ခြင်းရေ၊ ကယ်တင်တာက ဒဏ်ရာတွေကို ဆိုလိုတယ် သာယာကြည်နူးဖွယ်တောင်တန်းက သိုးထိန်းနဲ့ သင်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးလား ကျွန်တော်တို့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆို သူက မြေပုံတစ်ခုမပေးခဲ့ဘူးလား သူက ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ရုံပဲ ပြီတော့ ကျွန်တော်တို့ကို သတိပေးခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် မြေပုံ.. သူကျွန်တော်တို့ကို မပေးခဲ့ဘူး ဘုရင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုက မြေပုံတစ်ခုပဲ၊ ခရစ်ရှန် ဒါတွေက ဘယ်နေရာကိုသွားရမယ် ဘယ်နေရာကိုမသွားရဘူးဆိုတာ မညွှန်ပြဘူးလား? ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော် ဒါကိုအခုမြင်နိုင်ပြီ။
သင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ သတိဝီရိယရှိပါ သင်တို့ရဲ့လမ်းခရီးအဆုံးနဲ့ အလွန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာရှိတဲ့အချိန် ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုသိရမလဲ သင်တို့က နောက်ဆုံးအရိပ်ရဲ့အစွန်းမှာ ရပ်နေတဲ့အချိန် မကောင်းဆိုးဝါးက တန်ခိုးမရှိတဲ့နေရာကိုကျော်လွန်ပြ ီး နယ်စပ်မှာ ဟောင်းသောအရာတို့ ကျန်ခဲ့ပြီး၊ အသစ်သောအသက်တာစတင်တဲ့နေရာ ဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက် မကြောက်ပါနဲ့ ဟိုတဘက်မှာ သင်တို့ရဲ့ထာဝရမြို့တည်ရှိနေတဲ့အတ ွက်ပါ သင်တို့က ဘုရင်ရဲ့ ကြီးမြတ်မှုကို သင်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာ သင်တို့ရဲ့ ခြေလှမ်း ပိုပြီးနက်နဲတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုပြီးတိမ်တာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ မင်းဘယ်သွားမှာလဲ? ဟိုတဘက်မှာ မြို့ကို မင်းမမြင်ရဘူးလား? ငါက ဖြတ်ကျော်သွားဖို့ ရှာနေတာ။ ခရစ်ရှန်! ခရစ်ရှန်! ငါနားမလည်ဘူး။ ဖြတ်သွားဖို့ လမ်းတစ်ခုခု ရှိမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး ဒီပတ်လည်မှာ ဘယ်လမ်းမှမရှိဘူး အပေါ်ကနေလည်း လမ်းမရှိဘူး ဒါကိုဖြတ်ပြီးမှပဲရှိတယ်။ ဘယ်လို? မင်းဘာအကြောင်းကိုပြောနေတာလဲ? ဒီမှာလမ်းမရှိဘူး ဒါကဘာလဲဆိုတာ မင်းမမြင်ရဘူးလား? ဒါက နောက်ဆုံးအရိပ်လေ မကောင်းဆိုးဝါးတန်ခိုးတွေမရှိတဲ့
တဘက်ကမ်းနယ်စပ်လေ သေခြင်း သေခြင်း ဟောင်းသောရာတို့ ထာဝရတိုင်ကျန်ခဲ့ပြီး အသက်တာအသစ်စတင်တဲ့နေရာ ငါတို့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်.. ငါတို့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလှည့်နိုင်တော့ဘူး ငါတော့သွားပြီ။ မျှော်လင့်ခြင်း? ငါ ကတော့ သွားပြီ ခရစ်ရှန်! ငါကတော့.. မသွားဘူး မင်းသွားရမယ် မင်းဒီလောက်ထိ သွားခဲ့ပြီးပြီ။ တခြားသူတွေအတွက် လမ်းကို လုပ်ပေးဖို့၊ မျှော်လင့်ခြင်း! ငါ့ဇနီးအတွက် လမ်းကို ပြင်ဆင်ပေးဖို့၊. .ငါ့မိသားစုအတွက်! သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့! ဒါဆို မင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး တခြားသူတွေအတွက် လမ်းခရီးကို ခင်းပေးထားခဲ့ပြီးပြီ၊ မင်းအတွက် တူညီတဲ့သူက ခင်းပေးခဲ့သလိုပဲပေါ့ မင်းရဲ့အပိုင်းက လိုက်လျှောက်ဖို့ပဲ၊ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ မင်းရဲ့အရင်မြို့က လူတွေအကြားမှာ စကားပြောစရာမရှိတာကို မဖြစ်စေခဲ့ဘူး တခြားသူတွေလည်း လိုက်လာလိမ့်မယ် ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်ပ ေါ့? ဒီမေးခွန်းက၊ ချစ်သောခရစ်ရှန်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖြေမှရနိုင်မှာပါ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုက်ခဲ့ရင်.. သင်က သူတို့ကို ဒီနေရာအထိပဲဦးဆောင်မှာလား
ဒါမှမဟုတ်.. မကောင်းဆိုးဝါးက မပါဝင်နိုင်တော့တဲ့ အသစ်သောအသက်တာ ထာဝရအသက်တာဆီကိုလား? ငါတော့သွားပြီ! ငါသွားရမယ် မျှော်လင့်ခြင်း? ငါတို့ရဲ့ လမ်းခရီးတလျှောက်လုံးမှာ မင်းငါ့ကိုပြောခဲ့တာ ဘုရင်ကငါတို့ကို ဘယ်တော့မှ မပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး- သူရဲ့ကတိတော်တွေက မှန်ကန်တယ် သူက ငါ့ကိုလည်း အခုပျက်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါသိတယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ညီအစ်ကို! မျှော်လင့်ခြင်း!!! သူသွားပြီ။ ကောင်းကင်မြို့ဆီကို ကတိပေးထားခဲ့ပြီးတဲ့အရာအားလုံးဆီက ို ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဇွဲလုံ့လနဲ့ရှာနေခဲ့တဲ့နေရာဆီကို ကောင်းပြီ? ကျွန်တော်ကြောက်တယ် အဲဒါ မှားတာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ သင်က သင့်ဘဝအတွက် ဘုရင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခဲ့ပြီးပြီ ၊ ခရစ်ရှန်.. ပြီးတော့ ငါ၊ ချစ်သောသူငယ်ချင်း.. ငါသူ့ကို ယုံကြည်တယ် ငါ့ရဲ့- မင်းငါ့ကို ပြန်မြင်ရလိမ့်မယ်၊ ခရစ်ရှန်! လှိုင်းတွေက မင်းကို ဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာ သေခြင်းရဲ့အေးစက်တဲ့လက်က မင်းရဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကို ပတ်ရစ်ထားတဲ့အချိန်မှာ.. ငါအဲဒီမှာ ရှိနေလိမ့်မယ်!
မဟုတ်ဘူး.. သင်တို့က ဘုရင်ရဲ့ ကြီးမြတ်မှုကို သင်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးနက်နဲတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုပြီးတိမ်တာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ကူညီပါ! ငါသွေးထွက်နေတယ်… သင်.. သင်က သိုးထိန်းပဲ ငါဖြစ်တယ် ငါက ကောင်းသောသိုးထိန်းဖြစ်တယ် ကျွန်တော် အသွေးကိုမြင်ခဲ့တာ.. ကျွန်တော်သွေးထွက်နေတာ.. အဲဒါက မင်းရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘူး ခရစ်ရှန်၊ ငါ့ရဲ့သွေးပါ ြီးတော့ မင်း အဲဒီဒဏ်ရာတွေအကြောင်းကို ထပ်ပြီးစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး.. သင်က ဟောင်းသောအရာတို့ ကွယ်ပျောက်ပြီး၊ အသက်ရဲ့အသစ်သောအရာတွေ စတင်တဲ့နေရာကို ရောက်နေပါပြီ! ကြိုဆိုပါတယ် ခရစ်ရှန်၊ ကောင်းကင်မြို့တော်က နေကြိုဆိုပါတယ်..ခရစ်ရှန် ကြိုဆိုပါတယ်ညီအစ်ကို! ကြိုဆိုပါတယ်! ခရစ်ရှန် ငါချစ်ရတဲ့ညီအစ်ကို! မျှော်လင့်ခြင်း.. သစ္စာရှိခြင်း! ငါ့မိတ်ဆွေတွေ.. ငါ့ညီအစ်ကိုတွေ!
အို ငါ့ရဲ့ ချစ်ရတဲ့သူတွေ ဒါကိုမြင်နိုင်မယ် သူတို့လည်းပဲ လာကြလိမ့်မယ်! သူတို့လည်းပဲ လာကြလိမ့်မယ်! The Pilgirm's Progress အမည်ရသော ဒီစာအုပ်ကို၊ သင်းအုပ်ဆရာဂျွန်ဘန်ယန်က ၁၆၀၀ ၀န်းကျင်တွင် သူ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အကျဥ်းချခံရစဥ် ရေးသားခဲ့သည်၊ သမ္မာကျမ်းစာပြီးရင် ဒုတိယမြောက်လွှမ်းမိုးမှုအကြီးဆုံ းစာအုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသောဒီစာအုပ်ကို ဘာသာစကားပေါင်း ၂၀၀ကျော် ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး ယနေ့အထိ ပုံနှိပ်နေရဆဲဖြစ်သည် ဒီဇာတ်လမ်းသည် သန်းပေါင်းများစွာသောလူများကို ဘုရင်နဲ့ဘုရင့်မြို့တော်ရှိရာသို့ တည့်တည့်မတ်မတ် လျှောက်လှမ်းနိုင်စေရန် တွန်းပို့ပေးနေပါသည်၊ ဒါက ငါ့ကိုခံစားစေသလို မင်းရဲ့နှလုံးသားကို နာကျင်စေလိမ့်မည်ဆိုတာ ငါသိတယ် ဒါပေမယ့် စာအုပ်က သမ္မာတရားကိုပြောတယ်ဆိုတာ ငါသံသယမရှိလို့ ငါသွားခဲ့တယ် ငါ့နှလုံးသားနားကို သယ်လာမယ့် ဒီစာမျက်နှာတွေက ကတိကို ငါယူခဲ့ပြီ မျက်စိဖြင့်လည်း မမြင်ရ၊
နားဖြင့်လည်း မကြားရ ဘုရင်က သူ့ကိုရှာဖွေတဲ့သူများအတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ဘယ်သူကမှ စိတ်ကူးမှန်းဆလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးခရစ်ရှန် အသက်ရှင်နေတယ်! သားတို့? သားတို့ရေ၊ ထကြ! သားတို့အဖေ အသက်ရှင်တယ်! သားတို့အဖေ အသက်ရှင်တယ်!